1836s The Tonight Show: အိမ်တွင်းထုတ်ဝေမှု (John Legend) images and subtitles
-Hey, ယောက်ျားတွေ, တစ် All- အသစ်ကမှကြိုဆိုပါတယ် အိမ်မှာထုတ်ဝေတဲ့ "Tonight Show" ။ ဝီနီကျေးဇူးတင်ပါတယ် မင်းဒါဆွဲတယ် - ဟုတ်တယ် - တကယ်ကိုကောင်းတယ်။ သင်ကပိုမိုရောင်စုံစေချင်ခဲ့တာလဲ - ဟုတ်တယ် - ဒါတော်တော်လေးကောင်းတယ် Frannie, မင်းဒါကိုရေးခဲ့တာလား - မဟုတ်ဘူး။ - ဟမ် - ငါလုပ်ခဲ့တယ် - ဒီညရဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းကဘယ်လိုလဲ။ ဂျွန်ဒဏ္Legာရီပြပွဲအပေါ်ဖြစ်ပါတယ် သူဟာ feedamerica.org နဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်၊ အရာတော်တော်လေးအေးမြသည်။ သငျသညျ, ဖရန့်ဆွဲခဲ့သလား - မဟုတ်ဘူး။ - ငါလုပ်ခဲ့တယ် Winnie ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ -Frannie, သင်ပြန်အဲဒီမှာထွက်ဆွဲထားသွားမည်နည်း - ဟုတ်တယ် -ကောင်းပြီ။ John Legend သည်ယနေ့ည our ည့်သည်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Feeding America အကြောင်းပြောမယ်။ အရာသည်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်၏ သူတို့မှာအစားအစာဘဏ် ၂၀၀ ကျော်ရှိတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့အစားအစာအစားအစာများကိုသူတို့ကကူညီပေးနေသည်။ သူတို့အံ့သြဖို့ကောင်းတယ် Jose Andres သည်သူတို့နှင့်အလွန်နီးစပ်သည် သူလုပ်နေတာပဲ၊ သူဟာကောင်းကင်တမန်လိုပဲ၊ သူကအံ့သြဖို့ကောင်းတယ် ကျနော်တို့အဲဒီအကြောင်းပြောနေတာပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်နောက်ပိုင်းမှာပြပွဲအတွက်, ငါတို့အချို့ရှိသည်တာပေါ့ "The Tonight Show" မှကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးဗီဒီယိုဖိုင်များ နီကိုးလ် Kidman အပါအ ၀ င် ငါအစဉ်အမြဲငါပြုခဲ့အရှိဆုံးအဆင်မပြေအင်တာဗျူးတွေထဲကတစ်ခု။ ဒီတော့အဲဒီအတွက်အဆင်သင့်ပြင်ပါ။ Guy, ဒီမှာငါနံနက်မှစ။ quarantine ၌တည်၏ အောက်ထပ်ကလာပြီးလတ်ဆတ်တဲ့ကော်ဖီဖျော်ခြင်းအားဖြင့်။ အဘယ်သူမျှမကြီးတွေသဘောတူညီချက်။ ဒီနံနက်မှလွဲ။ အံ့ဖွယ်အပစ္စည်းပစ္စယ။ ဒီမနက်မှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲကြည့်ပါ ဦး ။ အားလုံးဟိုင်း။ ငါပထမ ဦး ဆုံးထုတ်ဝေသည်ထင်သောအရာကိုမှကြိုဆိုပါ၏ "ဘယ်လိုဂျင်မီဒီတစ်ခုချွတ်ခဲ့တာလဲ" ငါကော်ဖီလုပ်နေတာပဲ၊ ဒါကကြော်ငြာမဟုတ်ဘူး။ ငါမစ္စတာကော်ဖီကြိုက်တယ် တကယ်တော့ဒါဟာရူးသွပ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါအဲဒီရေရဲ့နောက်ကျောကိုရေထည့်လိုက်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကော်ဖီကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့ရောက်ကြ၏။ ဘာ? အိုးထဲ၌ဘာမျှမရှိပါ။ ဘာ? ငါဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာလဲ ငါ David Blaine လိုပါပဲ ကောင်းပြီ နောက်ကျောကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြပွဲ။ ဝီနီ၊ မင်းဘာတွေအရောင်လဲ ကြည့်ရတာတော်တော်လှတယ် - ငါအရာလုပ်နေပါတယ်။ အမေကသူတို့ကိုတိပ်ခွေနေပြီးအမေလည်းအောက်လိုင်းများဆွဲသည်။ သူမလည်းဒီ taping ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့ပြီးသားလိုပဲ။ ထိုအခါငါတနှင့်အတူအဆင်သင့်ပါပဲ။ -Uh-ဟမ် - ယခုငါတတစ်ခုလုပ်နေပါတယ်။ ဒီဟာတွေအတွက်ဘာတွေလဲ - ရထားလမ်းများနှင့်လှေကားများအတွက် -Oh, 'ငါတို့ကစာလုံးပိုလိုတယ် Chutes နှင့်လှေကားသည်။ - ဟုတ်တယ် အခြား gummy တီကောင်ကိုငါလိုချင်တယ်။ - နောက်ထပ် gummy တီကောင်တစ်ခုလိုချင်တယ်။ ဟုတ်ကဲ့။ ငါသိတယ်။ ကောင်းပြီ၊ ညစာစားဖို့စောင့်ပါရစေ။ - ငါ gummy ပိုးကောင်များရနိုင်မလား။ ဟုတ်တယ်၊ မင်းမှာ gummy worm တွေရှိနိုင်တယ်။ ညစာစားအပြီး။ အိုကေလူတိုင်းလား -Frannie မှာဘာကြောင့်ရှိရတာလဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ -Frannie ကရတယ်။ သူမသည်ပတ်ပတ်လည်ပြေးပါတယ် သင်ကထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရတယ်။ မင်းလုပ်နေတယ် ဟုတ်လား ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောလှပသောစားဆင်ယင်, Frannie ။ ကောင်းပြီ၊ အဆင်ပြေမလား၊ ကောင်းပြီ, ဖရန့်, ဒီမှာ, သင်အခုဒီမှာထိုင်။ ငါ့ကို gummy တစ်ခုရဖို့သွားခွင့်ပြုပါ။ ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘူး။ - ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် -ရေး။ -ငါပြန်လာခဲ့မယ်။ ဟင့်ဝီ၊ မင်းနေစရာလိုသေးတယ် တစ်ယောက်ယောက်ကကင်မရာပေါ်ရောက်နေတယ်။ ကောင်းပြီလား - [Giggles] ဟင်ဝင်း။ - ဟီ ဒီနေ့ဘယ်လိုသွားနေလဲ။ - ကောင်းပါပြီ -The Chutes and Ladders များအတွက်ဂိမ်းအပိုင်းအစများကိုရေးဆွဲနေပါသလား။ -We ပြီးသားဒီတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ် ဝိုင် -Yahah? -ဒီမှာ! - မင်းကယောက်ျားတွေကောင်းတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖေ။ -You ဒီနေ့အရမ်းကောင်းတယ်။ တကယ်လို့ခင်ဗျားအဲဒီလိုခံစားမိမယ်ဆိုရင်၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသော monologue ပြက်လုံးများကိုသင်ရယ်နိုင်သည်။ မင်းအဲဒီလိုလုပ်နေတာလား။ ဖေဖေရဲ့ပြက်လုံးတွေကိုရယ်ရတာနဲ့တူလား။ အိုကေ။ ယောက်ျားတွေဒီမှာသွား။ ကောင်းပြီအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား "The Tonight Show" တွင်ထုတ်ဝေသည့်အိမ်တွင်ထုတ်ဝေပါ။ အင်း၊ ယောက်ျားတွေ၊ ဒီနေ့အင်္ဂါနေ့ပါ မတ်လ ၂၄ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ 31ပြီလ ၃၁ ရက်၊ စနေနေ့၊ အောက်တိုဘာ ၄၇ ရက်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်မလမ်းကြောင်းပျောက်သွားတယ် ယောက်ျားတွေလား ငါတို့နှင့်ငါတို့ဥစ္စာကိုအတူတကွသွင်းထားနိုင်သည်။ -Frannie, Frannie ။ ငါဒီမှာပြောနေတာပါ ကောင်းပြီ မင်းတို့ monologue အတွက်အဆင်သင့်ပဲလား -Uh-ဟမ် -You အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား - မဟုတ်ဘူး။ - အိုကေ။ သင်ရယ်နိုင်သည်။ မင်းဘယ်လိုရယ်မောနေတာလဲ မင်းဘယ်လိုရယ်မောနေတာလဲ - [ရယ်သံများ] - ဒါမိုက်တာပဲ ဒါကသင်ရယ်တတ်ပုံမဟုတ်ဘူး။ ကောင်းပြီအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား သွားပြန်ပြီ။ "The Tonight Show" တွင်ထုတ်ဝေသည့်အိမ်တွင်ထုတ်ဝေပါ။ ကောင်းပြီ၊ ယောက်ျားတွေ၊ ဒီနေ့မတ်လ ၂၄ ရက်အင်္ဂါနေ့ပါ သို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ Aprilပြီ ၃၁ ရက်၊ စနေနေ့၊ အောက်တိုဘာ ၄၇ ရက်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်မလမ်းကြောင်းပျောက်သွားတယ် အမေရိကန်အချို့သည်ယခုပင်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာနာရီများရှိနေသည်ကိုငါတွေ့ခဲ့သည်။ - ကျွန်ုပ်ဤအရာကိုထည့်နိုင်ပါသလား - -Hey, ယောက်ျားတွေ, တိုးတိုးပြောနိုင်မလား? -Mine - ဟမ်၊ ဖရန့်၊ Winnie, Winnie, ငါဒီလိုလုပ်သကဲ့သို့သင်တို့တိုးတိုးပြောနိုင်? -Frannie ကျေးဇူးပြုပြီးမယူပါနဲ့ သေးငယ်တဲ့တီးတိုးကဲ့သို့။ သေးငယ်တဲ့တိုးတိုးလေးလိုပဲ [Indistinct တိုးတိုး] သေးငယ်တဲ့တီးတိုးလိုပဲ။ -ငါကတိပေးတယ်။ [သီးခြားတိုးတိုးလေး] နံပါတ်အမှတ် - အမေရိကန်အချို့သည်ယခုအခါပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောနာရီများရှိနေသည်ကိုငါတွေ့ခဲ့သည်။ မည်သူမဆိုထိုအရာနှင့်အတူတက်လာသူသည်ကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်ပါ။ အမှုအရာသည်ထိုအိမ်၌ကောင်းကောင်းမသွားဘူး။ ဟေး၊ ကရင်မနက် ၁၀ နာရီပါ အခြားပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောအခြားနာရီတစ်ခုကော။ လူတွေအိမ်မှာထိုင်နေတာကိုငါကြားခဲ့ရတယ် အခုပိုပိုပြီးအစာစားနေတယ်။ မြေကြီးပေါ်ရှိလူတိုင်းစွန့်ပစ်လိုက်သလိုမျိုးဖြစ်သည်။ [ရယ်သံများ] နှစ်ပတ်ကြာအထီးကျန်မှုကဂယက်ရိုက်လာပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ငါ Adam Sandler မှတဆင့်အကောင်းဆုံးရှင်းပြနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ် တစ်နေ့နေ့မှာ၊ အိုကေ၊ ကလေးတွေ၊ တချို့အနုပညာနှင့်လက်မှုပညာကိုသွားကြစို့ ပြီးတော့မာကာရိုနီကိုပိုက်သန့်စင်ထဲထည့်လိုက်တာကောင်းလိုက်တာ။ " ဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာ "ခင်ဗျားရဲ့အစ်မကိုမနှိပ်စက်တော့ဘူး။ " Shut up! "[ရယ်မောသံများ] [ရယ်သံများ] Adam Sandler ကလူတိုင်းကိုရယ်စေတယ်။ ငါလွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်ကဤနေ့စွဲတွင်မြင်ခဲ့သည် "The Office" ကို NBC မှာပွဲထုတ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၊ ငါရုံးကိုလွမ်းတယ် အိုးပျားရည်၊ သင်သည်ဤအရာ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သင် "ငါရုံးကိုလွမ်းတယ်" လို့ပြောရင် -The Office ကိုလည်းလွမ်းတယ် - ငါသွား, သင် "The Office" ကိုကြည့်? ခင်ဗျားကရုံးကိုသွားတာငါလွမ်းနေတယ်။ - မဟုတ်ဘူး၊ မင်းရုံးကိုသွားမယ် Winnie ကကြိုက်တယ် [ရယ်သံများ] ယနေ့သတင်းများ နွေရာသီအိုလံပစ်ကိုရွှေ့ဆိုင်းထားကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ဒါဟာတကယ့်ကိုတုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ရာပါ၊ ငါလေ့ကျင့်ရေးကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်သွားခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါအမှန်ပဲ။ အိုလံပစ်မရှိပါ။ အဲဒီအစားသူတို့ကဘယ်သူ့ကိုမှတံဆိပ်များအားလုံးပေးအပ်ကြသည် အဘယ်သူသည်5နှစ်အောက်ဆိနှင့်အတူအိမ်မှာကပ်နေသည်။ [ရယ်သံများ] - ပျားရည်၊ သွားလေရာ ငါလာမယ့်အရာတစ်ခုခုရတယ် အဲဒီမှာသင်သွားပါ။ [ရယ်သံများ] - ဖေဖေ! -ငါသိတယ်။ အိုလံပစ်အားနောက်နှစ်အထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်။ သတင်းတွေကြားတဲ့အခါ - [ရယ်သံများ] ဒီသတင်းကသတင်းတွေထွက်လာတဲ့အခါမှာ၊ "အမ်။ ငါ့အချိန်ဇယားကိုစစ်ဆေးကြည့်ရအောင်။ ဟုတ်ပါတယ်, ကျယ်ပြန့်ဖွင့်လှစ်။ "[ရယ်သံများ] NASA ရဲ့အရင်အာကာသယာဉ်မှူးတစ်ယောက်ကိုငါတွေ့ခဲ့တယ် အထီးကျန်အတွက်ဘယ်လိုရှင်သန်ရမယ်ဆိုတာကိုအကြံပေးနေပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဆီကနေကြားချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ NASA ဒါမှမဟုတ် RadioShack မှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောပါ။ အဲဒီမှာသင်သွားပါ။ ဒါ monologue ပဲ။ လူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုငါတစ်ခုခုလုပ်တော့မယ် ငါတို့လုပ်လိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အိမ်မှာကလူမေးခွန်းများကိုစေလွှတ်ခဲ့သည် သငျသညျယောက်ျားတွေအဘို့နှင့်အမေများအတွက်။ ဒါကြောင့်အခုအချိန်မှာ "Fallons ကိုမေးမြန်းပါ။ " အတွက်အချိန်ရောက်လာပြီ ♪♪ - ဒါကိုတောင်မှတ်တမ်းတင်နေသလား။ -Yeah, အဲဒါပေါ့။ -Hi! -Honey, ဒါကမင်းရဲ့ပွဲ ဦး ထွက်ပါ။ [ရယ်သံများ] ဘာလဲ။ လူအများစုကမေးခွန်းတွေမေးနေကြတယ် - သူတို့ကငါ့ကိုမင်းကိုဒါမှမဟုတ်ကလေးတွေကိုမေးစေချင်တယ်။ - အိုကေ။ - ယူ - -သွားပြန်ပြီ။ - ဒါဆိုငါတို့သွားခဲ့တယ် - လူမှုရေးအရဝေးကွာသွားစေရန်အတွက်လမ်းလျှောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့လမ်းလျှောက်ဖို့သွားတာပေါ့ အဲဒါဟာအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဆိတ်ငြိမ်ဆုံးနေရာလား။ ငါတို့စဉ်းစားသောအရာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဤတွင်စမ်းသပ်မှုတတ်၏။ - ဒါဟာကျွန်တော့်ဇနီးနန်စီဖလော့လိုပါ။ - ဟီ - သို့သော်သင်၏သမီးက Juvonen ဖြစ်သည်။ -မှန်ပါတယ်။ - သွားသေးလား သင်ထုတ်လုပ်သည့်အခါ Juvonen မှ? - ငါထင်တယ် -သင် ... လုပ်သည်? - ဟုတ်တယ် - သင်နှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Drew Barrymore ဖြစ်သည်။ ဟုတ်တယ်၊ အနှစ် ၂၀ နီးပါးရှိတယ်။ အဘယ်သူမျှမနှစ် 20 ကျော်။ - ဒါမှန်တယ်လား - ဟုတ်တယ် သူမအသက် ၁၉ နှစ်ကတည်းကကျွန်မတို့အတူတကွအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ - အရင်ကထုတ်လုပ်သူအတွေ့အကြုံရှိလား။ - မဟုတ်ဘူး။ ငါ့မှာထုတ်လုပ်သူအတွေ့အကြုံမရှိဘူး။ ငါ Wyoming အတွက် dude မွေးမြူရေးခြံပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်အတွေ့အကြုံရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိအိမ်များကိုကျွန်ုပ်ရှင်းလင်းခဲ့သည် ကျွန်တော်လေယာဉ်မယ်တစ်ယောက်ပါ -ဒါအမှန်ပဲ။ -ခဏလေးပဲ။ အိုး, ငါအိုးမဲ့အိမ်မဲ့အားလုံးကုသနိုင်ထင်ခဲ့တယ် ဒီအနုပညာရှင်နှင့်တ ဦး တည်းအချက်မှာ။ ဒါကပျော်စရာအလုပ်ပဲ။ - ဟုတ်တယ် သေချာတာပေါ့ဒီတစ်ခုအပေါ်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံး။ - ဟုတ်တယ် - အခြားထူးဆန်းအထွေထွေအလုပ်များ။ - ဟုတ်တယ် - အထိ - -မင်းဘယ်မှာမွေးတာလဲ? မင်းကော်နက်တီကပ်မှာမွေးတာ။ - ကွန်နက်တီကတ်မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။ - ထမြောက်တော်မူ? ကယ်လီဖိုးနီးယားမြောက်ပိုင်း။ မြောက်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယား။ -Marin ကောင်တီ၊ Mill ချိုင့်ဝှမ်း။ -Mille Valley ။ -Funky ဟောင်း Mill ချိုင့်။ ငါပြောသင့်တယ်, ထို့နောက် funky ဖြစ်ခဲ့သည်။ - ပေါ်လာတဲ့အချိန်တိုင်း၊ ရွှေဂိတ်တံတားကိုအချိန်မရွေးတွေ့နိုင်သည်၊ နင်ကနင်နဲ့တူတူပဲ၊ - [ရယ်သံများ] - "ဆန်ဖရန်စစ္စကို။ " - လူများစွာအတွက်အထင်ကရဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အမှတ်တရများ။ - ဟုတ်ကဲ့၊ hashtag သည် #askthefallons ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာကြောင့်သဘောတူလိုက်တာလဲ - ကင်မရာရိုက်တာလား။ -ငါမသိဘူး။ နံပါတ် ဆိုလိုတာကကူးစက်ရောဂါကငါ့ကိုကင်မရာနဲ့ရိုက်တာလို့ပြောတာကိုမုန်းတယ်။ \_ t ဒါပေမယ့်ငါအများကြီးနောက်ကွယ်မှပိုနှစ်သက်။ ပြီးတော့လူတိုင်းကပရိသတ်တခုလိုမယ်လို့ထင်တယ်၊ ပြီးတော့သင်တွေ့တဲ့လူတချို့ရှိတယ် သူတကယ်လူတွေကိုဖျော်ဖြေချင်တယ်။ ထိုအခါငါပရိသတ်ကိုပိုပြီးပါပဲ။ သင်တို့မူကားအလိုမရှိကြ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ထောင်စုတွင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းရန်အခြားမည်သူမဆို။ [ရယ်သံများ] - မပြောပါနဲ့။ အိုကေ။ - ဒီမှာငါတို့ဖြစ်ကြသည်။ မနက်ဖြန်ငါတို့ခွေးဂယ်ရီကိုလူတွေ့မေးမြန်းတယ်။ အိုကေ။ -Gary လာ - ငါတို့အစီအစဉ်မလုပ်ခဲ့ဘူး ဤအရာမဆိုအဆင်ပြေ ဂယ်ရီငါ့ရှေ့မှာမလာခဲ့ပါဘူး - နင်နင်ဂျင်မီပထမ ဦး ဆုံးဘာလဲ နံနက်ယံမှာပြောတာလား၊ - ကောင်းပြီ၊ "မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ!" - ငါမှန်တယ်? -Yeah "ကောင်းသောနံနက်။ " -Yeah, ကောင်းသောနံနက်။ -မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။ - ဟုတ်တယ် နံနက်တိုင်းလူတိုင်း။ - ပြီးတော့ငါငါ့ဖုန်းကိုဖမ်းပြီး။ - ထို့နောက်သင်သည်သင်၏ဖုန်းကိုဖမ်းပြီးပြုပါ။ - ဟုတ်တယ် ပြီးတော့ကလေးတွေနဲ့ငါပြောတာက \_ t "မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။" ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကငါတို့နဲ့အတူအိပ်နေလို့ပါ။ [ရယ်သံများ] သူတို့မှာကုတင်ရှိတယ်။ ငါတို့မှာကုတင်တွေရှိတယ်။ သူတို့မှာကုတင်တွေရှိတယ်။ - ဟုတ်တယ်၊ သူတို့ကငါတို့နဲ့မစဘူး။ ဒါပေမယ့်ညအချိန်မှာသူတို့ရောက်ရင် ၅ နဲ့ ၆ မှာပြောရအောင်။ ငါတို့ကသူတို့ကိုထုတ်ပစ်တာမဟုတ်ဘူး။ ထိုအခါခွေး။ များသောအားဖြင့်ငါတို့ထဲကငါးယောက်ပါ။ သူမခေါင်းအုံးပေါ်အိပ်နေသည်။ သူမကငါတို့ခေါင်းပေါ်မှာအိပ်တယ်။ ခေါင်းအုံးပေါ်မှာခေါင်းပေါ်မှာ - များသောအားဖြင့်သင်၏ခေါင်းနောက်ကွယ်မှသင်၏ကြီးမားသောခေါင်းအုံးပေါ်တွင်။ - ငါသိတယ်, သူမအရမ်းရယ်ရတယ်။ -တော်သေးတာပေါ့။ - အိုကေ။ သွားပြန်ပြီ။ "နန်စီ၊ ဂျင်မီဟာအချစ်ဇာတ်လမ်းလား။ ကျေးဇူးပြုပြီးဥပမာပေးပါ။ " - ငါထင်တယ် -သင် ... လုပ်သည်? - ဟုတ်တယ် [ရယ်သံများ] ကောင်းပြီ၊ ငါ၏အကြီးတွေ 50 မွေးနေ့ပါတီအဘို့အလိမ့်မယ် လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကပါတီမဟုတ်ပါ၊ မွေးနေ့၊ သူကကျွန်တော့်ကိုဘယ်လိုမောင်းရတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့တဲ့ကားကိုပေးတယ် နှင့်အထက်တန်းကျောင်းနှင့်ကောလိပ်မှတဆင့်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမောင်း ငါ့ကိုယ်ကိုငါပိုင်၏။ နောက်လာမယ့်သီတင်းပတ်တွေအတွင်းမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ VW Bus၊ နောက်တဖန် Mill Mill ကိုသင်သိလျှင် ငါဘယ်ကလာသလဲ၊ - လူအများစုကဒီကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုရပ်တန့်စေတယ်။ သူတို့ကကားထဲမှာကျွန်တော်ပါ ၀ င်တာကိုတောင်ဂရုမစိုက်ကြဘူး။ - မဟုတ်ဘူး။ သူတို့သည်သင့်ကိုသတိမထားမိကြပါ။ - "ငါအဲဒီကားထဲမှာနေခဲ့တယ်။ " ဒါမှမဟုတ်ဘတ်စ်ကားကအမြဲတမ်း။ နယူးယောက်ကနေကယ်လီဖိုးနီးယားကိုလမ်းတစ်လျှောက်ငါသွားခဲ့တယ်။ ဒီ VW Bus အကြောင်းလူတွေမှာတကယ်ကိုလှပတဲ့ပုံပြင်တွေရှိတယ်။ - ဘယ်သူထိတယ်ဆိုတာကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းထိတယ်။ - ဟုတ်တယ် - ငါထပ်တူခံစားရတယ် ဒါကြောင့်အရမ်းရင်ခုန်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်အေးလမ်း။ - မဟုတ်ပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါဘယ်လိုလုပ်ခဲ့သလဲ။ -ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ် ဒီတော့သူလုပ်ခဲ့တာကအေးတာပဲ သူကငါ့ကိုဖြစ်ရပ်မှန် Logic ကိုပေး၏။ -ပါးစပ်ပိတ်ထား။ ကုန်ပစ္စည်းနေရာချထားမှုဖြစ်ရပ်မှန် Logic ။ ကက်ဆက်ကိုင်ဆောင်သူ။ - ကက်ဆက်ထဲ၌ - ။ ထိုအခါငါကဖွင့်လှစ်။ ထိုအခါငါအကြိုက်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးအားလုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့ဂီတကိုအရမ်းဂရုစိုက်တယ် သို့သော်၎င်းသည် Harry Nilsson မှ Muppets အထိဖြစ်သည် နှင့် John Denver သည်ခရစ်စမတ်ကမ္ဘာကိုအတူတကွသီဆိုခဲ့သည်။ -Bob Marley -Bob Marley, Carly Simon, ကြောင်စတီဗင်၊ - ဟုတ်တယ် - မင်းသား - ပျော်စရာပဲ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်တော့်အယောက် ၂၀ လိုပဲ ငါတကယ်ကြိုက်တဲ့အမှန်တကယ်အယ်လ်ဘမ်တွေ။ ထိုအခါငါကထင်ခဲ့တယ်။ ငါကဲ့သို့ဖြစ်၏ ဒါကအဆင်အပြေဆုံးပဲ။ ဒါတွေအားလုံးပဲ။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုနားထောငျ။ ငါတို့လိုချင်တာတွေအမျိုးသမီးတွေကြားမှာပဲ။ Blah, blah, blah ။ သူကသွားတယ်။ "အိုး, gosh, ငါစန်း box ကိုမေ့လျော့ကြ၏။ ဒါဟာကားဂိုဒေါင်ထဲမှာဒါမှမဟုတ်တခြားထဲမှာထွက်ပါတယ်။ " ငါပြေးသကဲ့သို့ - ဟုတ်ကဲ့၊ မင်းကက်ဆက်တွေကိုဘယ်မှာကစားမလဲ။ - ကျွန်တော့်ကက်ဆက်တွေဖွင့်ဖို့အတွက်ဗုံး box ကိုတွေ့တော့ကျွန်တော်ထွက်ပြေးသွားတယ်။ ငါ့ညီက VW ဘတ်စ်ကားစီးတယ်။ - ဘတ်စ်ကားပေါ်ရှိကက်ဆက်စက်နှင့်အတူ။ - ဘတ်စ်ကားပေါ်ရှိကက်ဆက်စက်နှင့်အတူ။ Blaupunkt အဟောင်းသည်တူ၏၊ ကျနော်တို့နှစ်ဖက်စလုံးကစားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်သင်ဘယ်အပေါ်ဘက်ရောက်နေတယ်ဆိုတာသင်မသိဘူး အိုကောင်းကင်၊ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးအဖုံးကိုပိတ်ထားနိုင်တယ်။ -Yeah, တပြင်လုံးကိုအရာချွတ်လာပါတယ်။ - လူများသည်စတီရီယိုကိုခိုးယူသောကြောင့်။ - သင်၏ကားထဲတွင်မည်သူမျှမချိုးဖောက်ပါ။ ဟုတ်တယ် -Oh ဘယ်သူမှချိုးဖောက်ပြီးကက်ဆက်ဖွင့်စက်ကိုယူလိမ့်မည်မဟုတ်။ - ကောင်းကင်ဘုံ ဒါကြောင့်ဒီဟာကရင်ခုန်စရာအမူအရာများစွာထဲကတစ်ခုပါ။ -ဝိုး။ [လက်ခုပ်သံများ] -You ကြားရတော့မယ်။ - ဒါဟာစိတ်ကူးကောင်းပါတယ် ဒီထက်ပိုချင်ပါတယ် ကြားရတာနဲ့ချစ်တာကိုခံရတာ။ [ရယ်သံများ] မေးခွန်းများ။ တစ်ပတ်တစ်လျှောက်လုံးပိုမိုသောမေးခွန်းများ။ ငါတို့ကသူတို့ကိုဖြန့်တော့မယ်။ သို့သော် - မှန်ပါသလား။ ငါ့နှလုံးခုန်သံအတွက် -They ဒီမှာပါပဲ။ ဒါကငါ့အတွက်အနိုင်ရတာပေါ့၊ [ရယ်သံများ] -Oh, ငါတို့အခုအဆုံးသတ်နေပြီလား။ -Oh, yeah, ငါတို့မှာအဆုံးသတ်ပါတယ်။ [ရယ်သံများ] - ကောင်းပြီ၊ ငါတို့ကြားဖို့လိုအပ်သမျှ ဒါကငါကြားဖူးသမျှအကောင်းဆုံးဇာတ်လမ်းပဲ။ - ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ဖူးဘူး - မဟုတ်ဘူး။ လူမှုရေးဝေးကွာ - ဒါမှမဟုတ်ကားတစ်စီး။ - မဟုတ်ပါ၊ - ကလေးများအတွက်ကျောင်းကိုဆိုင်းငံ့ထားလိုက်သည် ယခုနှစ်၏ကျန်သည်။ ဆိုလိုတာကအားကစားဆိုတာမရှိဘူး၊ နှင့်သင်တန်းအဘယ်သူမျှမကျောင်းကပွဲ။ ဒါကြောင့်အဲဒီမှာထွက်ရှိသက်ကြီးရွယ်အိုများအားလုံးအတွက်၊ ဒီသီချင်းကမင်းအတွက်ပါ။ အဲဒါကို "မင်းရဲ့မေမေနဲ့အတူ Prom" လို့ခေါ်တယ်။ ♪♪ ♪မင်းအမေနဲ့အတူကျောင်းတက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်♪ ♪မင်းအမေနဲ့အတူကျောင်းတက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်♪ ♪သူမသည်သင်၏ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်သော်လည်းသူမတစ် ဦး တည်းသာဖြစ်သည် your 'သင်၏ညီမကမငြင်းပါနှင့်သင့်ခွေးသည်မပျော် ause ♪သူမဟာမင်းကိုအရမ်းကောင်းတဲ့ဖက်ရှင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်နဲ့ချိတ်ပေးမှာပါ♪ your သင့်အဖေသည်ရပ်နေစဉ်တွင်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်aမီးဖိုချောင်သုံးမည့်အစားကားနောက်ခန်းသို့ဗင်ကားအသေးစားတစ်စီးယူဆောင်လာသည် mom ဘယ်မှာမင်းအမေနဲ့အတူကခုန်မလဲ♪ ♪သင်၏အဘသည်လာကြတယ် your သင့်ညီမက "မင်းကယောက်ျားတွေကအရမ်းဆိတ်ညံနေတယ်" says ပြောနေစဉ် ♪အမေဟာ Prom ဘုရင်မပါ၊ မင်းက Prom ဘုရင် you'll ဖြစ်လိမ့်မယ်♪ it's ဒါကလုံးဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာမဟုတ်ဘူး the night night about night night night night night the night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night the night the the night night night the night special night night the special night the the night the the night the the night special the night special the night night night the the night the night night night night night the night night night the night night night night the night night night night her night night night night her night night night her night night night her her her night her night her her ♪ her ♪ her ♪♪♪♪♪ her ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ her her ♪ late သိပ်နောက်ကျသွားပြီ၊ သူမရဲ့ Facebook မှာကြိုက်တဲ့အရာတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်♪ "အိုးကောင်းတယ်၊ အန်တီလင်ဒါကငါဟာအဖိုးတန်တယ်လို့ထင်တယ်။ " the ကျောင်းကပွဲပြီးရင်သူမမျက်စိကို into ကြည့် you'll မည် surprise ပြီးတော့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မင်းကိုယူခဲ့တဲ့ညအတွက်သူမကို thank ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Mom Mom Mom'll Mom "Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom ♪♪♪♪ say ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည် ♪သို့သော်ဤသီးသန့်စိုက်ပျိုးခြင်းအတွက်သင်နှင့်အတူရှိနေခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်ဝမ်းမြောက်ပါသည်။ ♪ ♪မင်းကမင်းရဲ့မိဖုရားပဲ၊ မင်းကငါ့အမေပဲ♪ ♪မင်းဗုံးလား♪ ♪♪ အိုးဟိုင်း။ ကိုယ့်ထိုင်ခုံတွေကို ၀ င်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ ယောက်ျားများ၊ John Legend သည်ပထမဆုံးလူများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်သည် Instagram မှသူ၏အိမ်မှဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ရန်။ အရမ်းအေးသွားတယ် ငါယောဟန်နှင့်အတူဖမ်းမိ ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးအကြောင်းပြောဆိုရန်။ စုံစမ်းသည်။ သူငယ်ချင်း၊ Buddy ငါအကောင်းဆုံးလုပ်လိုက်ပြီ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် -ဝမ်းသာစွာဖြင့်။ အိုကေဒီမှာသွား။ ကျွန်တော်အသံသွင်းနေတယ် ငါတို့သွားမယ် ဒါအားလုံးကောင်းတယ် မင်းအခုဘယ်မှာလဲ - ငါအိမ်မှာငါတို့ living ည့်ခန်းထဲမှာပါ။ - ဒီလိုလုပ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါတကယ်တကယ်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်, ဒါကိုကြည့်နေတဲ့သန်းပေါင်းများစွာသောလူတွေလိုပဲ။ - သင်သိကတည်းကအိပ်ရာပေါ်မှာလုပ်, \_ t ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို "Tonight Show" မှာတကယ်ခံစားခဲ့ရတယ်။ - အတိအကျ။ ဒါကဖုန်းခေါ်တာကောင်းပါတယ် သူငယ်ချင်း၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုယ်ကသဘောပေါက်နားလည်။ အချိန်တွေဖြည့်ဆည်းဖို့သင်ဘာတွေလုပ်နေလဲ။ မင်းမှာကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ သူတို့ကိုတစ်နေ့လုံးဖျော်ဖြေရန်မည်မျှခဲယဉ်းသည်ကိုသာကျွန်ုပ်တို့လေ့လာနေသည်။ [ရယ်ကြတာနှစ်မျိုးလုံး] -Luna ရဲ့ 3, ညာ? - ဟုတ်တယ်၊ သူမတစ်လမှာ ၄ နှစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်၊ -The ကလေးရဲ့ 1? မေလသည် ၂ ရက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ မွေးနေ့ပွဲတွေကျင်းပဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် ဒါပေမယ့်ငါတို့မသိဘူး ကျနော်တို့နေဆဲကြောင်းအချက်မှာဝေးကွာပါလိမ့်မယ်။ -Thet တော်တော်လေး - ဒါဟာတော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းပါပဲ။ သငျသညျ, Luna နှင့်အတူဂိမ်းများကိုကစားဖူး, ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများကို, သို့မဟုတ်သူမအဲဒီလိုမထားဘူး? သူမဟာ Hungry Hippo ကစားနည်းကိုလေ့လာသည်။ -အဲဒါကောင်းတယ်။ - ပြီးတော့သူမဂိမ်းကစားတဲ့အခါသူမအရမ်းသဘောကောင်းတာကိုသဘောပေါက်မိတယ်။ သူမသည်အားလုံးလမ်းအနိုင်ရချင်ပါဘူး။ လိုပဲသူမကကျွန်တော်တို့ကိုအခါတိုင်းချည်နှောင်ဖို့လိုသည်။ - မဟုတ်ဘူး! [ရယ်ကြတာနှစ်မျိုးလုံး] ထိုအရာသည်အနှစ်တစ်ထောင်ဆိတ်မလေးဖြစ်သည်မဟုတ်လော။ - သူမကိုပိုပြီးယှဉ်ပြိုင်စေချင်တယ်၊ - ဟုတ်တယ် သူမကြင်နာတာကိုကြိုက်တယ် ဒါပေမယ့်ကျိန်းသေသူမကိုဆုံးရှုံးသို့မဟုတ်လည်စည်းချင်ကြဘူး ပြီးတော့ကျွန်တော့်ကိုအနိုင်ရခြင်း၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ကဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတယ်။ -Yeah, ငါ့သမီးဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့တူရဲ့။ ငါ Chutes & Ladders တွင် ဦး ဆောင်နေစဉ်သူမငိုသည်။ သူမက "ငါမလုပ်ချင်ဘူး" လိုပဲ "ဂိမ်းကိုပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။ အနိုင်ရလိမ့်မယ်။ လာစမ်းပါ" လိုပဲ - ဟုတ်တယ် ဒါပေမယ့်အရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ် "မဟုတ်ဘူး၊ အဖေ၊ မင်းအဆင်ပြေတယ်၊ ​​မင်းအဆင်ပြေတယ်။ မင်းအဆင်ပြေပါတယ် ငါတို့ချည်ထားတယ်။ ကြည့်ကြ၊ ငါတို့ချည်ထားတယ် "သူမအနိုင်ရခဲ့ရင်တောင် သူမသည်အမှန်တကယ်အနိုင်ရခဲ့သည်။ - Chrissy နဲ့ကောဘယ်လိုလဲ။ ယောက်ျားတွေဘာလုပ်နေလဲ မင်းရဲ့အချိန်တွေလား အများကြီး -Netflix ။ -Oh မင်းဘာတွေကြည့်နေတာလဲ မင်းဘာကြည့်နေတာလဲ ပြပွဲလိုတယ် ငါတို့ Peaky Blinders တွေလိုက်တက်နေတယ်။ ငါတို့ပြီးဆုံးပြီ ရာသီ ၅ ပြီးဆုံးပါပြီ။ ဒါကြောင့်ငါတို့စာသားအမီလိုက်နေကြတယ်၊ - ငါပြန်သို့ရတယ်။ "Peaky မျက်မမြင်များ" အကြောင်းအားလုံးကိုမေ့သွားတယ် ယခုရာသီ6လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ လာစမ်းပါ ကျနော်တို့ဖြစ်ပျက်ကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ ငါပြောခဲ့တာပဲ ကျွန်တော်ထိပ်တန်းစားဖိုမှူးကိုစတင်ခဲ့ပါတယ် ပြီးတော့ငါ 'Top Chef' ကိုအငမ်းမရစားတော့မယ်။ ငါမစောင့်နိုင်ဘူး၊ ပြီးတော့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပဲရှိသေးတယ်။ ငါ "ယောက်ျားတွေ!" သွား -သွားကြရအောင်! ငါ့ကိုလေးပေးပါ။ လေးပြီးသားလုပ်ဖို့ရှိတယ်ရှိတယ်ငါသိ၏။ လာပါ။ လုံးဝကင်းတယ်၊ ပြီးတော့ကျနော်တို့က Tiger King ကိုကြည့်နေတယ်။ လူတိုင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးပါပဲ - ငါမမြင်ရသေးဘူး ဒါထူးထူးဆန်းဆန်းလား - ဒါဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ထူးဆန်းပြီးအရမ်းရယ်စရာကောင်းတယ်။ ပြီးတော့ဒါဟာယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုရဲ့ပြတင်းပေါက်တစ်ခုပါ သင်၌သင်မဟုတ်လျှင်သင်ရုံအကြောင်းကိုစိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်။ - ကိုယ်ပိုင်တိရစ္ဆာန်ရုံပိုင်တဲ့လူတွေလား။ အဲဒါမှန်လား? - ဟုတ်တယ် ဒါကြောင့်အမေရိက ကျားများကဲ့သို့သောတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအတွက်အကြီးဆုံးကျက်စားရာနေရာဖြစ်သည်။ ငါတို့အမေရိကမှာကျားတွေပိုများလာတယ် ကမ္ဘာပေါ်မှာကျန်ရှိနေတဲ့တောရိုင်းတွေထက်ပိုပါတယ်။ ဒါအရူးမဟုတ်ဘူးလား - ဘယ်မှာလဲ ဖလော်ရီဒါလား ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်။ ဒါကြောင့်ဖလော်ရီဒါတွေအများကြီးပါ။ ကျွန်ုပ်အတွက်ဖလော်ရီဒါကဲ့သို့ခံစားရသည် ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ ဒါပေမယ့်လည်းဥက္ကလာဟိုးမားပြည်နယ်လည်းဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ Saga အောက်ပါအတိုင်း ယှဉ်ပြိုင်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်များ၏ဤအုပ်စုသည်, ပြီးတော့လူသတ်မှုလည်းရှိတယ်။ ပယောဂရှိတယ်။ သူ့မှာဖောက်ပြန်မှုရှိတယ်။ အရာအားလုံးရှိတယ်။ အရူးပါ ဂျင်မီမင်းအခုထိုင်ပြီးထိုင်နေပြီလား။ -Yeah ငါကီထိုင်အတွက်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်တယ်။ အဲဒါငါလုပ်ဖို့ပြောခဲ့တာပဲ - အိုကေ။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကအကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာလုံးလုံးအလုပ်မလုပ်ဘူးလို့ခံစားရတယ် ငါနောက်ဆုံးတော့ယခုအပတ်ကဆိုသည် ငါတကယ်တော့နောက်တဖန်ထွက်အလုပ်လုပ်တူတူသွားပါလိမ့်မယ်။ - ရလာတဲ့အခါမှာထိုင်ခုံမှာခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လုပ်နေတာပဲ - ရုတ်တရက်အားလုံး, သင်ရုံပတ်ပတ်လည်ရပ်, ရုံကီထိုင်အတွက်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်။ အိုကေဒီမှာသွား။ - ထိုင်ပြီးထိုင်ခိုးကြည့်လိုက်သည်။ ငါပြောတာအားလုံးပဲ ♪ကီထိုင်၊ ကီထိုင်၊ ကီထိုင်--ကီထိုင် ats ♪ကီထိုင်၊ ကီထိုင်၊ ကီထိုင်,-ကီထိုင်-ကီထိုင်, ♪ကီထိုင်♪ - လူတိုင်း! အိုကေ။ ငါသူတို့ကိုတယ်။ - ဟေးငါပြောတာတစ်ခုကလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြပွဲအပြင်, သင်တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေပွဲလုပ်ခဲ့တယ်။ - ဟုတ်တယ် -အရမ်းမိုက်တယ်။ ငါအဲ့တာကိုကြိုက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ငါအများကြီးလူများကချစ်ကြတယ်ငါသိ၏။ မင်းကိုဘာလုပ်စေခဲ့တာလဲ။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဘာကလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလဲ။ - ငါကလုပ်နေတာပေါက်ကွဲမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့ - မင်းတို့အားလုံးသိတယ်၊ အနုပညာရှင်တွေအများကြီးအပါအဝင်အနုပညာရှင်တွေအများကြီး အဘယ်သူသည်အခုအချိန်မှာခရီးစဉ်အပေါ်ဖြစ်ထင်နေကြသည်။ ငါ့ခရီးစဉ်နွေရာသီအထိမ ဒါပေမယ့်အိမ်မှာကပ်နေတဲ့ပရိတ်သတ်တွေအများကြီးရှိတယ် သူတို့ပုံမှန်အားဖြင့်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုလုပ်နေတာထွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အလိုရှိ၏ သူတို့ဖျော်ဖြေပွဲသွားထွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အလိုရှိ၏ နှင့်ဤအရာအလုံးစုံသည်အခြားပျော်စရာအမှုအရာလုပ်နေတာ။ ဒါပေမယ့်အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့လူတိုင်းကိုအတူတကွစုစည်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခဲ့တယ် ဖျော်ဖြေပွဲများ၏ဤတိုက်ရိုက်စီးလုပ်ဖို့ဖြစ်လိမ့်မယ်, ငါတို့သည်ဤအတွေးအခေါ်နှင့်အတူပေါ်လာသောတစ်ခုတည်းသောသူများမဟုတ်ပါ။ ခရစ်မာတင်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်တစ်ချိန်တည်းအတူတူတက်လာနေသည်။ ငါမန်နေဂျာတွေကိုငါလုပ်ချင်တာကိုပြောတဲ့အခါသူတို့က "Chris Martin က Global Citizen အတွက်တစ်ခုလုပ်ပေးမယ်။ " ငါတို့မတိုင်မီပိုက်ဆံစုဆောင်းခဲ့သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည် နှင့်၎င်းတို့၏ဖြစ်ရပ်အချို့ကို NBC နှင့် MSNBC တွင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ဒီတော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံသားတွေနဲ့လုပ်ရတာစိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ ငါတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့, ကိုယ့်စိတ်ကူးမှအသိအမြင်ရောက်စေဖို့ကြိုးစားနေ လူတွေဟာအိမ်မှာနေပြီးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဝေးဝေးနေသင့်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြသည် ကျမတို့အတွက်ပိုက်ဆံရှာနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအချို့က လူတွေကိုဖျော်ဖြေဖို့နဲ့လူတွေကိုစုရုံးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ပရိတ်သတ်ရှေ့မှောက်ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုလုပ်ခြင်း၊ ပါးနပ်သောလား။ ဒါထူးဆန်းလားဒါမှမဟုတ်သင်ကြိုက်လား? - ဒီဟာကအရမ်းပျင်းစရာကောင်းပေမယ့်ငါပြောမယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ Instagram Live မှာမှတ်ချက်တွေပေါ်လာလို့ပါ တစ်ယောက်ယောက်ကိုလုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာနှလုံးသားလေးရှိလာတယ်၊ အမှန်တကယ်သင်သည် Instagram Live မှအသေးစိတ်အချက်အလက်များရရှိသည် သင်တစ် ဦး ပရိသတ်ကိုထံမှရလိမ့်မယ်ထက်။ လိုချင်တာကမင်းကရွှင်လန်းမှုမရပေမယ့်မင်းရတယ် - "ငါတကယ်ပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ " - ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ် - ရတယ်၊ မင်းရတယ်၊ အိုး၊ မင်းဒီသီချင်းကိုဖွင့်လို့ရမလား။ အမ်၊ အမ် - "- [ရယ်သံများ] - ကျပန်းတောင်းဆိုမှုအမျိုးအစားများ၊ မေးခွန်းများ၊ ပြီးတော့ပရိသတ်ဆီကနေခင်ဗျားဒါကိုဘယ်တော့မှရောက်မှာမဟုတ်ဘူး သငျသညျ, တူ, ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်, သင်သိ, မေးလျှင်မဟုတ်လျှင် တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်အသေးစိတ်တုံ့ပြန်ချက်သည်။ - [ရယ်သံများ] အားလုံးတိတ်ဆိတ်ကြပါစို့။ တစ်ကြိမ်မှာတစ်ခု တစ်ကြိမ် -One ။ [ရယ်သံများ] - ဒါကထူးဆန်းတဲ့ပါပဲ။ - ဟုတ်တယ် - ပြီးတော့မင်းပြောနိုင်တာက 'D-Nice ငါတို့မနေ့ညကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့လို့ပဲ။ မင်းဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာမင်းစစ်ဆေးကြည့်ရမလားမသိဘူး။ - ဟုတ်တယ် - ရူးခဲ့တယ် -Dell Nice သည်ငါတို့၏မိတ်ဆွေဟောင်းဖြစ်သည်။ ပြီးတော့သူကကျွန်တော့်အိမ်မှာ ၄၀ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုကစားခဲ့တယ်။ ပြီးတော့သူ - ငါသည်သူ၏ Instagram ဘဝမှအပေါ်လျှိုလျှိုပေါ်ပေါက်ခဲ့သည် သူကအပတ်အစောပိုင်းကသူတို့ကိုလုပ်နေတာအခါ, ဒါပေမယ့်စနေနေ့မှာပဲပေါက်ကွဲခဲ့တယ်၊ သူအရမ်းပျော်ခဲ့တယ် - ဟုတ်တယ် သူနဲ့စကားပြောနေတုန်းမျောနေတာပဲ၊ ပြီးတော့ဒါကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် သင်တို့ကဲ့သို့ယောက်ျားသည်ဤအဆိုတော်ကြည့်ဖို့ တိတ်ဆိတ်စွာနေရန်အချည်းနှီးသောအခန်းဖျော်ဖြေ။ ဒါပေမယ့်ထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေနားထောင်နေကြတယ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုထုတ်ဖော်ပြသ အဲဒါဟာအေးမြတဲ့အသစ်တစ်ခုပဲ ငါတို့တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူးလို့ထင်တယ် -Yeah, နှင့်ယခုအချိန်တွင်မှောင်မိုက်နှစ်ဖက်အများကြီးရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီအငွေအချပ်အချို့ဖြစ်နိုင်သည်ဆိုတဲ့အချက်ကို ငါရှိသည်လုပ်ထင်ပါတယ် ငါတို့အတူတူတွေ့ကြုံခံစားနေရတယ်လို့ခံစားရတယ်၊ ငါတို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဝေးကွာနေပေမယ့် ငါတို့အချင်းချင်းဖြတ်ပြီးကူညီပေးနေတယ်။ -ဘာဖြစ်သလဲ -- ယနေ့ညသင်ရွေးချယ်သောလှူဒါန်းမှုသည်အမေရိကကိုအစာကျွေးခြင်းဖြစ်သည်။ - ဟုတ်တယ် - ဒါကမင်းအတွက်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ - ဒါဆိုသူတို့တစ်နိုင်ငံလုံးမှာအစားအစာဘဏ်တွေရှိတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုကတော့ - ပထမဆုံးလူတွေရှိတယ် အမေရိကရှိနေ့တိုင်းဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသော ဒါပေမယ့်ဒီအကျပ်အတည်း၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခု လူငယ်အများစုကိုပြောနေတာဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ ကျောင်းမလာဖို့ နှင့်အကြိမ်များစွာ, အစားအစာများအတွက်၎င်းတို့၏နိယာမအရင်းအမြစ် သူတို့ကကျောင်းမှာရတယျ။ တချို့ကနယူးယောက်မှာလို အချို့ကကျောင်းတွင်မနက်စာနှင့်နေ့လည်စာစားကြသည်။ ပြီးတော့သူတို့ကရုန်းကန်နေရတဲ့မိသားစုထဲမှာရှိနေရင်၊ သူတို့ကိုကျွေးမွေးဖို့ကျောင်းမရှိဘူး၊ စားစရာအလုံအလောက်မရှိတဲ့ရှေးရှေးတွေအများကြီးရှိတယ် နှင့်ဤအချိန်ကာလအတွင်းဆာလောင်မွတ်သိပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နေရသောကျန်းမာရေးပြtoနာများအပြင် ငါတို့မြင်နေရတဲ့စီးပွားရေးပြissuesနာတွေအပြင် ရှေးရှေးအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းမဟုတ် နှင့်စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက် imploding ဤအရာအလုံးစုံဖြစ်ပျက်ခြင်း၊ ဆာလောင်မွတ်သိပ်မယ့်ရှေးရှေးတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဟိုဆေးအန်ဒရက်စ်နှင့်တွေ့သည် သူနှင့်အတူလုပ်နေတာဘာလုပ်နေလဲ - -He ရဲ့အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ -He ရဲ့အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ဒီအစားအစာဘဏ်တွေရှိတယ် တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ နှင့်အမေရိကားတိုက်ကျွေးခြင်းသည်ရန်ပုံငွေစုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည် ဒီအစားအစာဘဏ်တွေအတွက် သူတို့သည်တပြည်လုံး၌နှံ့ပြားကျော်စောကြ၏ လူတွေကိုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ဖို့ကူညီပေးနေသောကွဲပြားခြားနားသောအစားအစာဘဏ်များ။ -NBCs မှာမင်းတို့ယောက်ျားတွေကြည့်မယ်ဆိုရင် feedamerica.org ကိုသွားကြည့်ပါ နှင့်မည်သို့လှူဒါန်းမည်ကိုလေ့လာပါ။ ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကို YouTube မှာကြည့်နေရင်၊ တစ်နေရာရာမှာ Donate ခလုတ်ရှိတယ် ဒီမှာလားဒါမှမဟုတ်ဒီမှာလား သို့သော်၎င်းကို နှိပ်၍ မည်သည့်ငွေပမာဏကိုမဆိုကူညီနိုင်သည်။ တကယ်တော့ဆိုငွေပမာဏအနည်းဆုံး - ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။ ၅၀ ဆင့်နဲ့ဘာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာမင်းမသိဘူး။ အံ့သြစရာပါပဲ ဒါကြောင့်တစ်ခုခုပေးပါ။ ဂျွန်၊ မင်းကိုမင်းမသွားခင်ငါမင်းလုပ်ခဲ့တာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရှိတယ် - ဒီညငါတို့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်တစ်ခုလုပ်မယ်၊ ငါတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်။ - ဟုတ်တယ် တကယ်တော့၊ ငါတို့ကိုမင်းအရင်ကထက်ပိုပြီးလိုအပ်နေတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် -ဒါပေါ့။ - ကျွန်တော်တို့ကိုအယ်လ်ဘမ်အသစ်မှာသဲလွန်စပေးလို့ရမလား။ မကြာခင်ထွက်လာမလား? -Yeah, အယ်လ်ဘမ်အသစ်လာမယ့်နေသည်။ ငါတို့ရောနှောနေတယ် ငါတို့သိတဲ့အတိုင်းငါတို့ကြိုးတွေချည်းပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို string string ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမသေချာဘူး၊ ငါမသိတဲ့အတွက် ဘယ်လို orchestral မှတ်တမ်းတင်ခြင်းသို့ငါတို့လမ်းကိုဘယ်လိုဝေးကွာစေနိုင်သနည်း။ [ရယ်ကြတာနှစ်မျိုးလုံး] -Yeah, ထိုပါလိမ့်မယ် - ငါတို့ထွက်တွက်ဆပါလိမ့်မယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းကျွန်တော်တစ်ကြိမ်မှာကစားသမားအနည်းငယ်လိုလုပ်ရလိမ့်မယ် ပြီးတော့သင်သိ, ဒါကြောင့် overdub ။ ကျနော်တို့ကတွက်ဆပါလိမ့်မယ်။ - အဲဒါကိုသင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာအထူးသီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ - ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်တနည်းအားဖြင့်အဲဒါအများစုဟာမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးသားပါ။ ငါသည်ငါ့အသံအားလုံးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ အဓိကအစီအစဉ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည် ငါတို့ပြီးသွားတဲ့အချိန်အနည်းငယ်သာလုပ်ရတော့မယ်၊ ပြီးတော့ငါတို့ရောနှောမယ်။ ထိုအခါငါဂီတကိုချစ်။ ကျွန်တော်ဒီကာလအတွင်းမှာမရေးခဲ့ပါဘူး ဒါကြောင့်ဒါဟာတကယ်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ ဒီအခိုက်အတန့်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေရဲ့အကြောင်း။ -Right ။ တကယ်တော့ဒါဟာငါ့ရဲ့အချစ်ဆုံးအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် ... -ဘာ! သင်အိမ်၌ရှိနေလျှင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် နှင့် Corona ကလေးအချို့မွေးချင်တယ်။ [ရယ်ကြတာနှစ်မျိုးလုံး] -ကောင်းလိုက်တာ။ ကောင်းပြီ၊ - ဒါကြောင့်ငါသိတယ်၊ သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အချိန်များစွာကုန်လွန်လျှင် ပြီးတော့မင်းဒီတေးသံကိုလိုတယ်၊ ဒီအယ်လ်ဘမ် ... - ဒါဖြစ်နိုင်ပါတယ် -... ဖြစ်နိုင်ပါတယ် -You ဟာလူကောင်းတစ်ယောက်ပါ။ မင်းလုပ်သမျှအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နှင့်ဒီလုပ်ဖို့အချိန်ယူဘို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ feedamerica.org ။ ဒီမှာလူတိုင်းကမင်းကိုတန်ဖိုးထားတယ်၊ ပြီးတော့ဒီညနောက်ပိုင်းမှာသီချင်းလုပ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါတကယ်တကယ်တန်ဖိုးထားတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bud ။ -ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ -Bye ဂျွန်။ သူ၏အိမ်မှသီချင်း“ Actions” အသစ်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဂျွန်ဒဏ္Legာရီ။ ♪♪ - ♪ဟေ့၊ ♪ La-da-da၊ da-da ♪ ♪ La-da-da၊ da-da၊ la-da ♪ ♪ La-da-da-da-da here ဒီမှာငါထပ်သွားမယ် go ted ငါဖြုန်းတီးခဲ့သည့်အခြားချစ်ခြင်းမေတ္တာသီချင်းနှင့်♪ love နောက်ထပ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်ခုသည်သည်းခံခြင်းကင်းမဲ့သွားသည် ♪သူမသည်မလိုချင်ပါ၊ မလိုအပ်ပါ။ ♪ my ကျွန်ုပ်၏ဘောပင်မှလာသည့်အခြားစကားလုံး♪ ♪သူမသည် "မင်းဘယ်မှာလဲ" လို့ငါ့မျက်နှာကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ ♪ so ကျွန်ုပ်သည်ကဗျာဆန်လွန်းသည်ဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းကိုချန်လှပ်မိလိုက်သကဲ့သို့ခံစားမိသည် ♪ချော်ပါ♪ ♪ကျွန်ုပ်၏မေတ္တာသည်ခိုင်ခံ့ကြောင်းပြသရန်♪ home ကျွန်ုပ်အိမ်၌ရှိနေစဉ်သူမကိုခံစားစေပါ ♪ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ထွက်သွားသည့်အခါအတုမရှိ၊ အမှားမရှိ၊ သူမခံစားနိုင်သည် ♪လုပ်ရပ်များသည် l ထက်အသံကျယ်စွာပြောခြင်း၊ love အချစ်သီချင်းများထက်အသံကျယ်စွာပြောပါ♪ they သူတို့ဆက်သနေသောတေးသံ♪ ♪လုပ်ရပ်များသည် l ထက်အသံကျယ်စွာပြောခြင်း၊ love အချစ်သီချင်းများထက်အသံကျယ်စွာပြောပါ♪ wrong ငါအမှားအယွင်းတွေအားလုံးလုပ်နေတယ်♪ ♪ La-da-da-da-da ။ ဒီမှာငါတို့ထပ်သွားကြမယ်♪ benefits အကျိုးကျေးဇူးအချို့ရှိသောသူငယ်ချင်းနှစ် ဦး ♪ ♪သူမသည်သူမ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားလုံးကိုပေးသည်၊ ထို့နောက်ငါဖြုန်းတီးသည် song သီချင်းအသစ်တစ်ခုကိုရေးပါ၊ ထို့နောက်ဖျက်ပါ♪ before အိုး before အရင်ကငါပြောခဲ့သမျှသောအရာများ♪ she သူမအကြောင်းကြားလိုခြင်းမရှိတော့ကြောင်း♪ပြောခဲ့သည် ♪ငါအရမ်းတီထွင်ဖန်တီးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ like ခံစားရတယ် stay သင့်ကိုနေဖို့ပြောစရာဘာမှမရှိ♪ stay love ကျွန်ုပ်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားပြသခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အိမ်၌ရှိနေစဉ်သူမကိုခံစားစေပါ ♪ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ထွက်သွားသည့်အခါအတုမရှိ၊ အမှားမရှိ၊ သူမခံစားနိုင်သည် ♪လုပ်ရပ်များသည် l ထက်အသံကျယ်စွာပြောခြင်း၊ love အချစ်သီချင်းများထက်အသံကျယ်စွာပြောပါ♪ they သူတို့ဆက်သနေသောတေးသံ♪ ♪လုပ်ရပ်များသည် l ထက်အသံကျယ်စွာပြောခြင်း၊ love အချစ်သီချင်းများထက်အသံကျယ်စွာပြောပါ♪ wrong ငါအမှားအယွင်းတွေအားလုံးလုပ်နေတယ်♪ ♪ La-da-da-da, la-da-da-da-da away ♪ ♪ La-da-da-da, la-da-da၊ တစ်နေ့လုံး♪ ♪သူမကြားချင်သည်၊ မကြားချင်ပါ♪ I ငါပြောသောစကားလုံးတစ်လုံးaငါပြောသောစကားလုံး♪ ♪ La-da-da-da, la-da-da-da-da away ♪ ♪ La-da-da-da, la-da-da၊ တစ်နေ့လုံး♪ ♪သူမကြားချင်သည်၊ မကြားချင်ပါ♪ I ငါပြောသောစကားလုံးတစ်လုံးaငါပြောသောစကားလုံး♪ ♪လုပ်ရပ်များသည် l ထက်အသံကျယ်စွာပြောခြင်း၊ love အချစ်သီချင်းများထက်အသံကျယ်စွာပြောပါ♪ they သူတို့ဆက်သနေသောတေးသံ♪ ♪အပြုအမူများသည် than ထက် ပို၍ အသံကျယ်သည် songs အချစ်သီချင်းများထက်အသံကျယ်စွာပြောပါ♪ wrong ငါအမှားအယွင်းတွေအားလုံးလုပ်နေတယ်♪ ♪♪ [Chuckles] ကျေးဇူးတင်ပါတယ် - ဒီနေ့ပြပွဲမှာလူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ John Legend၊ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ရုံသာမကပြောနေတာလည်းပါပါတယ်။ ဘာအနုပညာရှင်ပါလဲ ကင်မရာအမှန်ဖြစ်လို့ကျွန်တော့်ဇနီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် အဖြစ်ကောင်းစွာကင်မရာအော်ပရေတာဖြစ်ခြင်း။ ထိုအခါငါတစ် ဦး Selfie ချောင်းကိုအသုံးပြု။ ငါ့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကကြီးမားတဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နှင့်ဂရပ်ဖစ်များအတွက် Winnie, ကိုယ့်န်းကျင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ခြင်းများအတွက် Franny ။ ငါကြည့်ရတာမင်းကောင်လေးတွေကိုချစ်တယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ NBC ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်၏လက်ကိုလျှော်ပါ။ မျက်နှာမထိနဲ့ လုံခြုံစွာနေပါ၊ နက်ဖြန်နေ့၌သင်တို့ကိုတွေ့မြင်မည်။ နောက်ထပ်ပြပွဲအသစ် နုတ်ဆက်ပါတယ်!
The Tonight Show: အိမ်တွင်းထုတ်ဝေမှု (John Legend)
< start="1.033" dur="1.002"> -Hey, ယောက်ျားတွေ, တစ် All- အသစ်ကမှကြိုဆိုပါတယ် >
< start="2.035" dur="2.936"> အိမ်မှာထုတ်ဝေတဲ့ "Tonight Show" ။ >
< start="4.971" dur="1.535"> ဝီနီကျေးဇူးတင်ပါတယ် မင်းဒါဆွဲတယ် >
< start="6.506" dur="1.568"> - ဟုတ်တယ် - တကယ်ကိုကောင်းတယ်။ >
< start="8.074" dur="1.768"> သင်ကပိုမိုရောင်စုံစေချင်ခဲ့တာလဲ >
< start="9.842" dur="1.068"> - ဟုတ်တယ် - ဒါတော်တော်လေးကောင်းတယ် >
< start="10.91" dur="1.268"> Frannie, မင်းဒါကိုရေးခဲ့တာလား >
< start="12.178" dur="1.101"> - မဟုတ်ဘူး။ - ဟမ် >
< start="13.279" dur="2.803"> - ငါလုပ်ခဲ့တယ် - ဒီညရဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းကဘယ်လိုလဲ။ >
< start="16.082" dur="1.101"> ဂျွန်ဒဏ္Legာရီပြပွဲအပေါ်ဖြစ်ပါတယ် >
< start="17.183" dur="2.769"> သူဟာ feedamerica.org နဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်၊ >
< start="19.952" dur="2.236"> အရာတော်တော်လေးအေးမြသည်။ >
< start="22.188" dur="3.003"> သငျသညျ, ဖရန့်ဆွဲခဲ့သလား >
< start="25.191" dur="1.702"> - မဟုတ်ဘူး။ - ငါလုပ်ခဲ့တယ် >
< start="26.893" dur="2.769"> Winnie ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="29.662" dur="1.969"> -Frannie, သင်ပြန်အဲဒီမှာထွက်ဆွဲထားသွားမည်နည်း >
< start="31.631" dur="1.801"> - ဟုတ်တယ် -ကောင်းပြီ။ >
< start="33.432" dur="2.603"> John Legend သည်ယနေ့ည our ည့်သည်ဖြစ်သည်။ >
< start="36.035" dur="1.969"> ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Feeding America အကြောင်းပြောမယ်။ >
< start="38.004" dur="1.167"> အရာသည်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်၏ >
< start="39.171" dur="1.469"> သူတို့မှာအစားအစာဘဏ် ၂၀၀ ကျော်ရှိတယ်။ >
< start="40.64" dur="3.837"> တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့အစားအစာအစားအစာများကိုသူတို့ကကူညီပေးနေသည်။ >
< start="44.477" dur="0.967"> သူတို့အံ့သြဖို့ကောင်းတယ် >
< start="45.444" dur="1.736"> Jose Andres သည်သူတို့နှင့်အလွန်နီးစပ်သည် >
< start="47.18" dur="3.002"> သူလုပ်နေတာပဲ၊ သူဟာကောင်းကင်တမန်လိုပဲ၊ >
< start="50.182" dur="1.903"> သူကအံ့သြဖို့ကောင်းတယ် ကျနော်တို့အဲဒီအကြောင်းပြောနေတာပါလိမ့်မယ်။ >
< start="52.085" dur="1.468"> ဒါ့အပြင်နောက်ပိုင်းမှာပြပွဲအတွက်, ငါတို့အချို့ရှိသည်တာပေါ့ >
< start="53.553" dur="1.301"> "The Tonight Show" မှကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးဗီဒီယိုဖိုင်များ >
< start="54.854" dur="1.602"> နီကိုးလ် Kidman အပါအ ၀ င် >
< start="56.456" dur="2.135"> ငါအစဉ်အမြဲငါပြုခဲ့အရှိဆုံးအဆင်မပြေအင်တာဗျူးတွေထဲကတစ်ခု။ >
< start="58.591" dur="3.17"> ဒီတော့အဲဒီအတွက်အဆင်သင့်ပြင်ပါ။ >
< start="61.761" dur="3.836"> Guy, ဒီမှာငါနံနက်မှစ။ quarantine ၌တည်၏ >
< start="65.597" dur="3.271"> အောက်ထပ်ကလာပြီးလတ်ဆတ်တဲ့ကော်ဖီဖျော်ခြင်းအားဖြင့်။ >
< start="68.868" dur="1.235"> အဘယ်သူမျှမကြီးတွေသဘောတူညီချက်။ >
< start="70.103" dur="2.735"> ဒီနံနက်မှလွဲ။ အံ့ဖွယ်အပစ္စည်းပစ္စယ။ >
< start="72.838" dur="1.568"> ဒီမနက်မှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲကြည့်ပါ ဦး ။ >
< start="74.406" dur="1.269"> အားလုံးဟိုင်း။ >
< start="75.675" dur="2.335"> ငါပထမ ဦး ဆုံးထုတ်ဝေသည်ထင်သောအရာကိုမှကြိုဆိုပါ၏ >
< start="78.01" dur="2.603"> "ဘယ်လိုဂျင်မီဒီတစ်ခုချွတ်ခဲ့တာလဲ" >
< start="80.613" dur="2.736"> ငါကော်ဖီလုပ်နေတာပဲ၊ ဒါကကြော်ငြာမဟုတ်ဘူး။ >
< start="83.349" dur="0.767"> ငါမစ္စတာကော်ဖီကြိုက်တယ် >
< start="84.116" dur="1.335"> တကယ်တော့ဒါဟာရူးသွပ်တယ်။ >
< start="85.451" dur="3.537"> ဒါပေမယ့်ငါအဲဒီရေရဲ့နောက်ကျောကိုရေထည့်လိုက်တယ်။ >
< start="88.988" dur="2.903"> ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကော်ဖီကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့ရောက်ကြ၏။ >
< start="91.891" dur="1.334"> ဘာ? >
< start="93.225" dur="3.938"> အိုးထဲ၌ဘာမျှမရှိပါ။ >
< start="97.163" dur="1.634"> ဘာ? >
< start="98.797" dur="2.57"> ငါဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာလဲ >
< start="101.367" dur="2.77"> ငါ David Blaine လိုပါပဲ >
< start="104.137" dur="2.301"> ကောင်းပြီ နောက်ကျောကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြပွဲ။ >
< start="106.438" dur="1.169"> ဝီနီ၊ မင်းဘာတွေအရောင်လဲ >
< start="107.607" dur="1.868"> ကြည့်ရတာတော်တော်လှတယ် >
< start="109.475" dur="3.738"> - ငါအရာလုပ်နေပါတယ်။ >
< start="113.213" dur="3.702"> အမေကသူတို့ကိုတိပ်ခွေနေပြီးအမေလည်းအောက်လိုင်းများဆွဲသည်။ >
< start="116.915" dur="2.77"> သူမလည်းဒီ taping ဖြစ်ပါတယ်။ >
< start="119.685" dur="1.535"> ငါတို့ပြီးသားလိုပဲ။ >
< start="121.22" dur="2.335"> ထိုအခါငါတနှင့်အတူအဆင်သင့်ပါပဲ။ >
< start="123.555" dur="1.936"> -Uh-ဟမ် - ယခုငါတတစ်ခုလုပ်နေပါတယ်။ >
< start="125.491" dur="4.371"> ဒီဟာတွေအတွက်ဘာတွေလဲ - ရထားလမ်းများနှင့်လှေကားများအတွက် >
< start="129.862" dur="1.067"> -Oh, 'ငါတို့ကစာလုံးပိုလိုတယ် >
< start="130.929" dur="1.502"> Chutes နှင့်လှေကားသည်။ >
< start="132.431" dur="1.601"> - ဟုတ်တယ် အခြား gummy တီကောင်ကိုငါလိုချင်တယ်။ >
< start="134.032" dur="1.035"> - နောက်ထပ် gummy တီကောင်တစ်ခုလိုချင်တယ်။ >
< start="135.067" dur="0.934"> ဟုတ်ကဲ့။ ငါသိတယ်။ >
< start="136.001" dur="1.402"> ကောင်းပြီ၊ ညစာစားဖို့စောင့်ပါရစေ။ >
< start="137.403" dur="1.368"> - ငါ gummy ပိုးကောင်များရနိုင်မလား။ >
< start="138.771" dur="1.601"> ဟုတ်တယ်၊ မင်းမှာ gummy worm တွေရှိနိုင်တယ်။ >
< start="140.372" dur="1.202"> ညစာစားအပြီး။ အိုကေလူတိုင်းလား >
< start="141.574" dur="2.369"> -Frannie မှာဘာကြောင့်ရှိရတာလဲ။ >
< start="143.943" dur="3.67"> ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ -Frannie ကရတယ်။ >
< start="147.613" dur="1.568"> သူမသည်ပတ်ပတ်လည်ပြေးပါတယ် >
< start="149.181" dur="1.769"> သင်ကထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရတယ်။ မင်းလုပ်နေတယ် >
< start="150.95" dur="1.268"> ဟုတ်လား >
< start="152.218" dur="2.268"> ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောလှပသောစားဆင်ယင်, Frannie ။ >
< start="154.486" dur="1.368"> ကောင်းပြီ၊ အဆင်ပြေမလား၊ >
< start="155.854" dur="2.303"> ကောင်းပြီ, ဖရန့်, ဒီမှာ, သင်အခုဒီမှာထိုင်။ >
< start="158.157" dur="2.302"> ငါ့ကို gummy တစ်ခုရဖို့သွားခွင့်ပြုပါ။ >
< start="160.459" dur="1.868"> ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘူး။ - ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် >
< start="162.327" dur="1.536"> -ရေး။ -ငါပြန်လာခဲ့မယ်။ >
< start="163.863" dur="1.902"> ဟင့်ဝီ၊ မင်းနေစရာလိုသေးတယ် တစ်ယောက်ယောက်ကကင်မရာပေါ်ရောက်နေတယ်။ >
< start="165.765" dur="2.102"> ကောင်းပြီလား - [Giggles] >
< start="167.867" dur="1.468"> ဟင်ဝင်း။ - ဟီ >
< start="169.335" dur="4.137"> ဒီနေ့ဘယ်လိုသွားနေလဲ။ - ကောင်းပါပြီ >
< start="173.472" dur="2.836"> -The Chutes and Ladders များအတွက်ဂိမ်းအပိုင်းအစများကိုရေးဆွဲနေပါသလား။ >
< start="176.308" dur="1.769"> -We ပြီးသားဒီတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ် ဝိုင် >
< start="178.077" dur="1.869"> -Yahah? -ဒီမှာ! >
< start="185.184" dur="2.636"> - မင်းကယောက်ျားတွေကောင်းတယ်၊ >
< start="187.82" dur="2.602"> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖေ။ -You ဒီနေ့အရမ်းကောင်းတယ်။ >
< start="190.422" dur="1.603"> တကယ်လို့ခင်ဗျားအဲဒီလိုခံစားမိမယ်ဆိုရင်၊ >
< start="192.025" dur="2.235"> ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသော monologue ပြက်လုံးများကိုသင်ရယ်နိုင်သည်။ >
< start="194.26" dur="1.935"> မင်းအဲဒီလိုလုပ်နေတာလား။ >
< start="196.195" dur="3.17"> ဖေဖေရဲ့ပြက်လုံးတွေကိုရယ်ရတာနဲ့တူလား။ >
< start="199.365" dur="2.102"> အိုကေ။ ယောက်ျားတွေဒီမှာသွား။ >
< start="201.467" dur="1.335"> ကောင်းပြီအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား >
< start="202.802" dur="1.969"> "The Tonight Show" တွင်ထုတ်ဝေသည့်အိမ်တွင်ထုတ်ဝေပါ။ >
< start="204.771" dur="1.868"> အင်း၊ ယောက်ျားတွေ၊ ဒီနေ့အင်္ဂါနေ့ပါ >
< start="206.639" dur="2.469"> မတ်လ ၂၄ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ >
< start="209.108" dur="3.17"> 31ပြီလ ၃၁ ရက်၊ စနေနေ့၊ အောက်တိုဘာ ၄၇ ရက်။ >
< start="212.278" dur="1.935"> ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်မလမ်းကြောင်းပျောက်သွားတယ် ယောက်ျားတွေလား >
< start="214.213" dur="2.769"> ငါတို့နှင့်ငါတို့ဥစ္စာကိုအတူတကွသွင်းထားနိုင်သည်။ >
< start="216.982" dur="2.269"> -Frannie, Frannie ။ >
< start="219.251" dur="1.703"> ငါဒီမှာပြောနေတာပါ >
< start="224.756" dur="1.936"> ကောင်းပြီ မင်းတို့ monologue အတွက်အဆင်သင့်ပဲလား >
< start="226.692" dur="1.102"> -Uh-ဟမ် -You အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား >
< start="227.794" dur="2.201"> - မဟုတ်ဘူး။ - အိုကေ။ >
< start="229.995" dur="2.737"> သင်ရယ်နိုင်သည်။ မင်းဘယ်လိုရယ်မောနေတာလဲ >
< start="232.732" dur="2.235"> မင်းဘယ်လိုရယ်မောနေတာလဲ >
< start="234.967" dur="2.035"> - [ရယ်သံများ] - ဒါမိုက်တာပဲ >
< start="237.002" dur="1.035"> ဒါကသင်ရယ်တတ်ပုံမဟုတ်ဘူး။ >
< start="238.037" dur="1.468"> ကောင်းပြီအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား သွားပြန်ပြီ။ >
< start="239.505" dur="1.802"> "The Tonight Show" တွင်ထုတ်ဝေသည့်အိမ်တွင်ထုတ်ဝေပါ။ >
< start="241.307" dur="2.936"> ကောင်းပြီ၊ ယောက်ျားတွေ၊ ဒီနေ့မတ်လ ၂၄ ရက်အင်္ဂါနေ့ပါ >
< start="244.243" dur="3.47"> သို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ Aprilပြီ ၃၁ ရက်၊ စနေနေ့၊ အောက်တိုဘာ ၄၇ ရက်။ >
< start="247.713" dur="2.536"> ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်မလမ်းကြောင်းပျောက်သွားတယ် >
< start="250.249" dur="4.071"> အမေရိကန်အချို့သည်ယခုပင်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာနာရီများရှိနေသည်ကိုငါတွေ့ခဲ့သည်။ >
< start="254.32" dur="1.268"> - ကျွန်ုပ်ဤအရာကိုထည့်နိုင်ပါသလား - >
< start="255.588" dur="1.568"> -Hey, ယောက်ျားတွေ, တိုးတိုးပြောနိုင်မလား? >
< start="257.156" dur="2.836"> -Mine - ဟမ်၊ ဖရန့်၊ >
< start="259.992" dur="3.27"> Winnie, Winnie, ငါဒီလိုလုပ်သကဲ့သို့သင်တို့တိုးတိုးပြောနိုင်? >
< start="263.262" dur="3.637"> -Frannie ကျေးဇူးပြုပြီးမယူပါနဲ့ သေးငယ်တဲ့တီးတိုးကဲ့သို့။ >
< start="266.899" dur="1.235"> သေးငယ်တဲ့တိုးတိုးလေးလိုပဲ >
< start="268.134" dur="2.202"> [Indistinct တိုးတိုး] သေးငယ်တဲ့တီးတိုးလိုပဲ။ >
< start="270.336" dur="0.968"> -ငါကတိပေးတယ်။ >
< start="271.304" dur="8.041"> [သီးခြားတိုးတိုးလေး] နံပါတ်အမှတ် >
< start="279.345" dur="2.736"> - အမေရိကန်အချို့သည်ယခုအခါပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောနာရီများရှိနေသည်ကိုငါတွေ့ခဲ့သည်။ >
< start="282.081" dur="1.835"> မည်သူမဆိုထိုအရာနှင့်အတူတက်လာသူသည်ကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်ပါ။ >
< start="283.916" dur="3.07"> အမှုအရာသည်ထိုအိမ်၌ကောင်းကောင်းမသွားဘူး။ >
< start="286.986" dur="1.101"> ဟေး၊ ကရင်မနက် ၁၀ နာရီပါ >
< start="288.087" dur="1.734"> အခြားပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောအခြားနာရီတစ်ခုကော။ >
< start="289.821" dur="1.635"> လူတွေအိမ်မှာထိုင်နေတာကိုငါကြားခဲ့ရတယ် >
< start="291.456" dur="2.67"> အခုပိုပိုပြီးအစာစားနေတယ်။ >
< start="294.126" dur="2.403"> မြေကြီးပေါ်ရှိလူတိုင်းစွန့်ပစ်လိုက်သလိုမျိုးဖြစ်သည်။ >
< start="296.529" dur="1.868"> [ရယ်သံများ] >
< start="298.397" dur="2.77"> နှစ်ပတ်ကြာအထီးကျန်မှုကဂယက်ရိုက်လာပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ >
< start="301.167" dur="2.602"> ငါ Adam Sandler မှတဆင့်အကောင်းဆုံးရှင်းပြနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ် >
< start="303.769" dur="2.069"> တစ်နေ့နေ့မှာ၊ အိုကေ၊ ကလေးတွေ၊ >
< start="305.838" dur="1.735"> တချို့အနုပညာနှင့်လက်မှုပညာကိုသွားကြစို့ >
< start="307.573" dur="3.437"> ပြီးတော့မာကာရိုနီကိုပိုက်သန့်စင်ထဲထည့်လိုက်တာကောင်းလိုက်တာ။ " >
< start="311.01" dur="2.569"> ဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာ "ခင်ဗျားရဲ့အစ်မကိုမနှိပ်စက်တော့ဘူး။ " >
< start="313.579" dur="5.338"> Shut up! "[ရယ်မောသံများ] >
< start="318.917" dur="7.108"> [ရယ်သံများ] >
< start="326.025" dur="2.97"> Adam Sandler ကလူတိုင်းကိုရယ်စေတယ်။ >
< start="328.995" dur="2.702"> ငါလွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်ကဤနေ့စွဲတွင်မြင်ခဲ့သည် >
< start="331.697" dur="1.701"> "The Office" ကို NBC မှာပွဲထုတ်ခဲ့သည်။ >
< start="333.398" dur="2.003"> ဘုရားသခင်၊ ငါရုံးကိုလွမ်းတယ် >
< start="335.401" dur="1.268"> အိုးပျားရည်၊ သင်သည်ဤအရာ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ >
< start="336.669" dur="3.369"> သင် "ငါရုံးကိုလွမ်းတယ်" လို့ပြောရင် >
< start="340.038" dur="1.269"> -The Office ကိုလည်းလွမ်းတယ် >
< start="341.307" dur="2.369"> - ငါသွား, သင် "The Office" ကိုကြည့်? >
< start="343.676" dur="2.168"> ခင်ဗျားကရုံးကိုသွားတာငါလွမ်းနေတယ်။ >
< start="345.844" dur="2.203"> - မဟုတ်ဘူး၊ မင်းရုံးကိုသွားမယ် >
< start="351.084" dur="1.134"> Winnie ကကြိုက်တယ် >
< start="352.218" dur="4.638"> [ရယ်သံများ] >
< start="356.856" dur="2.269"> ယနေ့သတင်းများ >
< start="359.125" dur="3.436"> နွေရာသီအိုလံပစ်ကိုရွှေ့ဆိုင်းထားကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ >
< start="362.561" dur="1.102"> ဒါဟာတကယ့်ကိုတုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ရာပါ၊ >
< start="363.663" dur="2.169"> ငါလေ့ကျင့်ရေးကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်သွားခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်။ >
< start="368.233" dur="1.202"> ဒါအမှန်ပဲ။ အိုလံပစ်မရှိပါ။ >
< start="369.435" dur="2.369"> အဲဒီအစားသူတို့ကဘယ်သူ့ကိုမှတံဆိပ်များအားလုံးပေးအပ်ကြသည် >
< start="371.804" dur="2.569"> အဘယ်သူသည်5နှစ်အောက်ဆိနှင့်အတူအိမ်မှာကပ်နေသည်။ >
< start="374.373" dur="1.768"> [ရယ်သံများ] >
< start="376.141" dur="2.97"> - ပျားရည်၊ သွားလေရာ >
< start="379.111" dur="2.169"> ငါလာမယ့်အရာတစ်ခုခုရတယ် အဲဒီမှာသင်သွားပါ။ >
< start="381.28" dur="3.17"> [ရယ်သံများ] >
< start="384.45" dur="1.668"> - ဖေဖေ! -ငါသိတယ်။ >
< start="386.118" dur="2.269"> အိုလံပစ်အားနောက်နှစ်အထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်။ >
< start="388.387" dur="3.87"> သတင်းတွေကြားတဲ့အခါ - [ရယ်သံများ] >
< start="392.257" dur="1.802"> ဒီသတင်းကသတင်းတွေထွက်လာတဲ့အခါမှာ၊ >
< start="394.059" dur="1.135"> "အမ်။ ငါ့အချိန်ဇယားကိုစစ်ဆေးကြည့်ရအောင်။ >
< start="395.194" dur="4.037"> ဟုတ်ပါတယ်, ကျယ်ပြန့်ဖွင့်လှစ်။ "[ရယ်သံများ] >
< start="399.231" dur="1.768"> NASA ရဲ့အရင်အာကာသယာဉ်မှူးတစ်ယောက်ကိုငါတွေ့ခဲ့တယ် >
< start="400.999" dur="2.603"> အထီးကျန်အတွက်ဘယ်လိုရှင်သန်ရမယ်ဆိုတာကိုအကြံပေးနေပါတယ်။ >
< start="403.602" dur="2.002"> ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဆီကနေကြားချင်တယ်ဆိုရင် >
< start="405.604" dur="1.636"> ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ >
< start="407.24" dur="2.802"> NASA ဒါမှမဟုတ် RadioShack မှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောပါ။ >
< start="410.042" dur="1.068"> အဲဒီမှာသင်သွားပါ။ >
< start="411.11" dur="0.867"> ဒါ monologue ပဲ။ >
< start="411.977" dur="2.102"> လူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="414.079" dur="2.636"> အခုငါတစ်ခုခုလုပ်တော့မယ် >
< start="416.715" dur="2.136"> ငါတို့လုပ်လိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူး၊ >
< start="418.851" dur="2.335"> ဒါပေမယ့်အိမ်မှာကလူမေးခွန်းများကိုစေလွှတ်ခဲ့သည် >
< start="421.186" dur="2.937"> သငျသညျယောက်ျားတွေအဘို့နှင့်အမေများအတွက်။ >
< start="424.123" dur="3.069"> ဒါကြောင့်အခုအချိန်မှာ "Fallons ကိုမေးမြန်းပါ။ " အတွက်အချိန်ရောက်လာပြီ >
< start="430.229" dur="4.271"> - ဒါကိုတောင်မှတ်တမ်းတင်နေသလား။ -Yeah, အဲဒါပေါ့။ >
< start="434.5" dur="4.07"> -Hi! -Honey, ဒါကမင်းရဲ့ပွဲ ဦး ထွက်ပါ။ >
< start="438.57" dur="2.236"> [ရယ်သံများ] ဘာလဲ။ >
< start="440.806" dur="2.669"> လူအများစုကမေးခွန်းတွေမေးနေကြတယ် - >
< start="443.475" dur="2.103"> သူတို့ကငါ့ကိုမင်းကိုဒါမှမဟုတ်ကလေးတွေကိုမေးစေချင်တယ်။ >
< start="445.578" dur="1.534"> - အိုကေ။ - ယူ - >
< start="447.112" dur="2.669"> -သွားပြန်ပြီ။ - ဒါဆိုငါတို့သွားခဲ့တယ် - >
< start="449.781" dur="5.339"> လူမှုရေးအရဝေးကွာသွားစေရန်အတွက်လမ်းလျှောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ >
< start="455.12" dur="1.401"> ဒါပေမယ့်ငါတို့လမ်းလျှောက်ဖို့သွားတာပေါ့ >
< start="456.521" dur="3.371"> အဲဒါဟာအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဆိတ်ငြိမ်ဆုံးနေရာလား။ >
< start="459.892" dur="2.202"> ငါတို့စဉ်းစားသောအရာ။ >
< start="462.094" dur="1.535"> ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဤတွင်စမ်းသပ်မှုတတ်၏။ >
< start="463.629" dur="2.97"> - ဒါဟာကျွန်တော့်ဇနီးနန်စီဖလော့လိုပါ။ - ဟီ >
< start="466.599" dur="1.468"> - သို့သော်သင်၏သမီးက Juvonen ဖြစ်သည်။ >
< start="468.067" dur="1.334"> -မှန်ပါတယ်။ - သွားသေးလား >
< start="469.401" dur="1.201"> သင်ထုတ်လုပ်သည့်အခါ Juvonen မှ? >
< start="470.602" dur="1.735"> - ငါထင်တယ် -သင် ... လုပ်သည်? >
< start="472.337" dur="2.269"> - ဟုတ်တယ် >
< start="474.606" dur="2.77"> - သင်နှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Drew Barrymore ဖြစ်သည်။ >
< start="477.376" dur="3.604"> ဟုတ်တယ်၊ အနှစ် ၂၀ နီးပါးရှိတယ်။ အဘယ်သူမျှမနှစ် 20 ကျော်။ >
< start="480.98" dur="1.234"> - ဒါမှန်တယ်လား - ဟုတ်တယ် >
< start="482.214" dur="1.602"> သူမအသက် ၁၉ နှစ်ကတည်းကကျွန်မတို့အတူတကွအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ >
< start="483.816" dur="2.135"> - အရင်ကထုတ်လုပ်သူအတွေ့အကြုံရှိလား။ >
< start="485.951" dur="2.97"> - မဟုတ်ဘူး။ ငါ့မှာထုတ်လုပ်သူအတွေ့အကြုံမရှိဘူး။ >
< start="488.921" dur="3.97"> ငါ Wyoming အတွက် dude မွေးမြူရေးခြံပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်အတွေ့အကြုံရှိခဲ့ပါတယ်။ >
< start="492.891" dur="2.77"> ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိအိမ်များကိုကျွန်ုပ်ရှင်းလင်းခဲ့သည် >
< start="495.661" dur="3.871"> ကျွန်တော်လေယာဉ်မယ်တစ်ယောက်ပါ -ဒါအမှန်ပဲ။ >
< start="499.532" dur="1.868"> -ခဏလေးပဲ။ >
< start="501.4" dur="2.268"> အိုး, ငါအိုးမဲ့အိမ်မဲ့အားလုံးကုသနိုင်ထင်ခဲ့တယ် >
< start="503.668" dur="2.003"> ဒီအနုပညာရှင်နှင့်တ ဦး တည်းအချက်မှာ။ >
< start="505.671" dur="1.635"> ဒါကပျော်စရာအလုပ်ပဲ။ >
< start="507.306" dur="1.135"> - ဟုတ်တယ် >
< start="508.441" dur="1.934"> သေချာတာပေါ့ဒီတစ်ခုအပေါ်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံး။ >
< start="510.375" dur="1.268"> - ဟုတ်တယ် >
< start="511.643" dur="3.237"> - အခြားထူးဆန်းအထွေထွေအလုပ်များ။ >
< start="514.88" dur="0.701"> - ဟုတ်တယ် - အထိ - >
< start="515.581" dur="0.867"> -မင်းဘယ်မှာမွေးတာလဲ? >
< start="516.448" dur="2.269"> မင်းကော်နက်တီကပ်မှာမွေးတာ။ >
< start="518.717" dur="2.336"> - ကွန်နက်တီကတ်မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။ - ထမြောက်တော်မူ? >
< start="521.053" dur="4.237"> ကယ်လီဖိုးနီးယားမြောက်ပိုင်း။ မြောက်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယား။ >
< start="525.29" dur="3.071"> -Marin ကောင်တီ၊ Mill ချိုင့်ဝှမ်း။ -Mille Valley ။ >
< start="528.361" dur="4.637"> -Funky ဟောင်း Mill ချိုင့်။ ငါပြောသင့်တယ်, ထို့နောက် funky ဖြစ်ခဲ့သည်။ >
< start="532.998" dur="1.235"> - ပေါ်လာတဲ့အချိန်တိုင်း၊ >
< start="534.233" dur="1.234"> ရွှေဂိတ်တံတားကိုအချိန်မရွေးတွေ့နိုင်သည်၊ >
< start="535.467" dur="1.669"> နင်ကနင်နဲ့တူတူပဲ၊ >
< start="537.136" dur="1.334"> - [ရယ်သံများ] - "ဆန်ဖရန်စစ္စကို။ " >
< start="538.47" dur="2.67"> - လူများစွာအတွက်အထင်ကရဖြစ်သည်။ >
< start="541.14" dur="1.167"> ဒါပေမယ့်အမှတ်တရများ။ >
< start="542.307" dur="0.834"> - ဟုတ်ကဲ့၊ >
< start="543.141" dur="3.505"> hashtag သည် #askthefallons ဖြစ်သည်။ >
< start="546.646" dur="3.436"> ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာကြောင့်သဘောတူလိုက်တာလဲ - ကင်မရာရိုက်တာလား။ >
< start="550.082" dur="1.769"> -ငါမသိဘူး။ နံပါတ် >
< start="551.851" dur="4.838"> ဆိုလိုတာကကူးစက်ရောဂါကငါ့ကိုကင်မရာနဲ့ရိုက်တာလို့ပြောတာကိုမုန်းတယ်။ \_ t >
< start="556.689" dur="3.402"> ဒါပေမယ့်ငါအများကြီးနောက်ကွယ်မှပိုနှစ်သက်။ >
< start="560.091" dur="3.438"> ပြီးတော့လူတိုင်းကပရိသတ်တခုလိုမယ်လို့ထင်တယ်၊ >
< start="563.529" dur="1.568"> ပြီးတော့သင်တွေ့တဲ့လူတချို့ရှိတယ် >
< start="565.097" dur="1.835"> သူတကယ်လူတွေကိုဖျော်ဖြေချင်တယ်။ >
< start="566.932" dur="2.235"> ထိုအခါငါပရိသတ်ကိုပိုပြီးပါပဲ။ >
< start="569.167" dur="2.804"> သင်တို့မူကားအလိုမရှိကြ >
< start="571.971" dur="2.068"> ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ထောင်စုတွင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းရန်အခြားမည်သူမဆို။ >
< start="574.039" dur="1.702"> [ရယ်သံများ] - မပြောပါနဲ့။ >
< start="575.741" dur="1.401"> အိုကေ။ - ဒီမှာငါတို့ဖြစ်ကြသည်။ >
< start="577.142" dur="1.335"> မနက်ဖြန်ငါတို့ခွေးဂယ်ရီကိုလူတွေ့မေးမြန်းတယ်။ >
< start="578.477" dur="1.235"> အိုကေ။ >
< start="579.712" dur="1.2"> -Gary လာ - ငါတို့အစီအစဉ်မလုပ်ခဲ့ဘူး >
< start="580.912" dur="1.135"> ဤအရာမဆိုအဆင်ပြေ >
< start="582.047" dur="1.569"> ဂယ်ရီငါ့ရှေ့မှာမလာခဲ့ပါဘူး >
< start="583.616" dur="1.367"> - နင်နင်ဂျင်မီပထမ ဦး ဆုံးဘာလဲ >
< start="584.983" dur="3.537"> နံနက်ယံမှာပြောတာလား၊ >
< start="588.52" dur="3.403"> - ကောင်းပြီ၊ "မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ!" >
< start="591.923" dur="2.97"> - ငါမှန်တယ်? -Yeah "ကောင်းသောနံနက်။ " >
< start="594.893" dur="1.935"> -Yeah, ကောင်းသောနံနက်။ -မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။ >
< start="596.828" dur="1.602"> - ဟုတ်တယ် နံနက်တိုင်းလူတိုင်း။ >
< start="598.43" dur="1.635"> - ပြီးတော့ငါငါ့ဖုန်းကိုဖမ်းပြီး။ >
< start="600.065" dur="1.535"> - ထို့နောက်သင်သည်သင်၏ဖုန်းကိုဖမ်းပြီးပြုပါ။ >
< start="601.6" dur="1.201"> - ဟုတ်တယ် ပြီးတော့ကလေးတွေနဲ့ငါပြောတာက \_ t >
< start="602.801" dur="1.468"> "မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။" >
< start="604.269" dur="3.604"> ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကငါတို့နဲ့အတူအိပ်နေလို့ပါ။ [ရယ်သံများ] >
< start="607.873" dur="1.402"> သူတို့မှာကုတင်ရှိတယ်။ >
< start="609.275" dur="1.467"> ငါတို့မှာကုတင်တွေရှိတယ်။ သူတို့မှာကုတင်တွေရှိတယ်။ >
< start="610.742" dur="1.836"> - ဟုတ်တယ်၊ သူတို့ကငါတို့နဲ့မစဘူး။ >
< start="612.578" dur="5.071"> ဒါပေမယ့်ညအချိန်မှာသူတို့ရောက်ရင် ၅ နဲ့ ၆ မှာပြောရအောင်။ >
< start="617.649" dur="1.569"> ငါတို့ကသူတို့ကိုထုတ်ပစ်တာမဟုတ်ဘူး။ >
< start="619.218" dur="1.568"> ထိုအခါခွေး။ များသောအားဖြင့်ငါတို့ထဲကငါးယောက်ပါ။ >
< start="620.786" dur="3.069"> သူမခေါင်းအုံးပေါ်အိပ်နေသည်။ >
< start="623.855" dur="1.135"> သူမကငါတို့ခေါင်းပေါ်မှာအိပ်တယ်။ >
< start="624.99" dur="2.136"> ခေါင်းအုံးပေါ်မှာခေါင်းပေါ်မှာ - >
< start="627.126" dur="2.302"> များသောအားဖြင့်သင်၏ခေါင်းနောက်ကွယ်မှသင်၏ကြီးမားသောခေါင်းအုံးပေါ်တွင်။ >
< start="629.428" dur="3.07"> - ငါသိတယ်, သူမအရမ်းရယ်ရတယ်။ -တော်သေးတာပေါ့။ >
< start="632.498" dur="2.001"> - အိုကေ။ သွားပြန်ပြီ။ >
< start="634.499" dur="2.169"> "နန်စီ၊ ဂျင်မီဟာအချစ်ဇာတ်လမ်းလား။ >
< start="636.668" dur="2.069"> ကျေးဇူးပြုပြီးဥပမာပေးပါ။ " >
< start="638.737" dur="1.602"> - ငါထင်တယ် -သင် ... လုပ်သည်? >
< start="640.339" dur="1.501"> - ဟုတ်တယ် [ရယ်သံများ] >
< start="641.84" dur="4.471"> ကောင်းပြီ၊ >
< start="646.311" dur="3.17"> ငါ၏အကြီးတွေ 50 မွေးနေ့ပါတီအဘို့အလိမ့်မယ် >
< start="649.481" dur="4.505"> လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကပါတီမဟုတ်ပါ၊ မွေးနေ့၊ >
< start="653.986" dur="5.672"> သူကကျွန်တော့်ကိုဘယ်လိုမောင်းရတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့တဲ့ကားကိုပေးတယ် >
< start="659.658" dur="3.837"> နှင့်အထက်တန်းကျောင်းနှင့်ကောလိပ်မှတဆင့်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမောင်း >
< start="663.495" dur="1.936"> ငါ့ကိုယ်ကိုငါပိုင်၏။ >
< start="665.431" dur="3.17"> နောက်လာမယ့်သီတင်းပတ်တွေအတွင်းမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ >
< start="668.601" dur="3.603"> VW Bus၊ နောက်တဖန် Mill Mill ကိုသင်သိလျှင် >
< start="672.204" dur="3.236"> ငါဘယ်ကလာသလဲ၊ >
< start="675.44" dur="1.802"> - လူအများစုကဒီကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုရပ်တန့်စေတယ်။ >
< start="677.242" dur="2.737"> သူတို့ကကားထဲမှာကျွန်တော်ပါ ၀ င်တာကိုတောင်ဂရုမစိုက်ကြဘူး။ >
< start="679.979" dur="2.001"> - မဟုတ်ဘူး။ သူတို့သည်သင့်ကိုသတိမထားမိကြပါ။ >
< start="681.98" dur="3.771"> - "ငါအဲဒီကားထဲမှာနေခဲ့တယ်။ " ဒါမှမဟုတ်ဘတ်စ်ကားကအမြဲတမ်း။ >
< start="685.751" dur="2.703"> နယူးယောက်ကနေကယ်လီဖိုးနီးယားကိုလမ်းတစ်လျှောက်ငါသွားခဲ့တယ်။ >
< start="688.454" dur="4.871"> ဒီ VW Bus အကြောင်းလူတွေမှာတကယ်ကိုလှပတဲ့ပုံပြင်တွေရှိတယ်။ >
< start="693.325" dur="2.236"> - ဘယ်သူထိတယ်ဆိုတာကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းထိတယ်။ >
< start="695.561" dur="2.169"> - ဟုတ်တယ် - ငါထပ်တူခံစားရတယ် >
< start="697.73" dur="1.401"> ဒါကြောင့်အရမ်းရင်ခုန်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ >
< start="699.131" dur="1.301"> ဒါပေမယ့်အေးလမ်း။ >
< start="700.432" dur="1.334"> - မဟုတ်ပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါဘယ်လိုလုပ်ခဲ့သလဲ။ -ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ် >
< start="701.766" dur="2.436"> ဒီတော့သူလုပ်ခဲ့တာကအေးတာပဲ >
< start="704.202" dur="4.172"> သူကငါ့ကိုဖြစ်ရပ်မှန် Logic ကိုပေး၏။ >
< start="708.374" dur="2.368"> -ပါးစပ်ပိတ်ထား။ ကုန်ပစ္စည်းနေရာချထားမှုဖြစ်ရပ်မှန် Logic ။ >
< start="710.742" dur="1.202"> ကက်ဆက်ကိုင်ဆောင်သူ။ >
< start="711.944" dur="2.469"> - ကက်ဆက်ထဲ၌ - ။ ထိုအခါငါကဖွင့်လှစ်။ >
< start="714.413" dur="3.337"> ထိုအခါငါအကြိုက်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးအားလုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ >
< start="717.75" dur="5.505"> ငါ့ဂီတကိုအရမ်းဂရုစိုက်တယ် >
< start="723.255" dur="3.003"> သို့သော်၎င်းသည် Harry Nilsson မှ Muppets အထိဖြစ်သည် >
< start="726.258" dur="3.403"> နှင့် John Denver သည်ခရစ်စမတ်ကမ္ဘာကိုအတူတကွသီဆိုခဲ့သည်။ >
< start="729.661" dur="2.036"> -Bob Marley -Bob Marley, Carly Simon, >
< start="731.697" dur="2.302"> ကြောင်စတီဗင်၊ >
< start="733.999" dur="1.335"> - ဟုတ်တယ် - မင်းသား >
< start="735.334" dur="1.501"> - ပျော်စရာပဲ။ >
< start="736.835" dur="2.335"> ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်တော့်အယောက် ၂၀ လိုပဲ >
< start="739.17" dur="3.137"> ငါတကယ်ကြိုက်တဲ့အမှန်တကယ်အယ်လ်ဘမ်တွေ။ >
< start="742.307" dur="3.271"> ထိုအခါငါကထင်ခဲ့တယ်။ ငါကဲ့သို့ဖြစ်၏ >
< start="745.578" dur="2.535"> ဒါကအဆင်အပြေဆုံးပဲ။ ဒါတွေအားလုံးပဲ။ >
< start="748.113" dur="1.835"> သငျသညျအကြှနျုပျကိုနားထောငျ။ >
< start="749.948" dur="2.169"> ငါတို့လိုချင်တာတွေအမျိုးသမီးတွေကြားမှာပဲ။ >
< start="752.117" dur="1.035"> Blah, blah, blah ။ >
< start="753.152" dur="2.869"> သူကသွားတယ်။ >
< start="756.021" dur="1.668"> "အိုး, gosh, ငါစန်း box ကိုမေ့လျော့ကြ၏။ >
< start="757.689" dur="2.737"> ဒါဟာကားဂိုဒေါင်ထဲမှာဒါမှမဟုတ်တခြားထဲမှာထွက်ပါတယ်။ " >
< start="760.426" dur="1.301"> ငါပြေးသကဲ့သို့ >
< start="761.727" dur="1.535"> - ဟုတ်ကဲ့၊ မင်းကက်ဆက်တွေကိုဘယ်မှာကစားမလဲ။ >
< start="763.262" dur="4.104"> - ကျွန်တော့်ကက်ဆက်တွေဖွင့်ဖို့အတွက်ဗုံး box ကိုတွေ့တော့ကျွန်တော်ထွက်ပြေးသွားတယ်။ >
< start="767.366" dur="3.203"> ငါ့ညီက VW ဘတ်စ်ကားစီးတယ်။ >
< start="770.569" dur="1.134"> - ဘတ်စ်ကားပေါ်ရှိကက်ဆက်စက်နှင့်အတူ။ >
< start="771.703" dur="1.568"> - ဘတ်စ်ကားပေါ်ရှိကက်ဆက်စက်နှင့်အတူ။ >
< start="773.271" dur="2.203"> Blaupunkt အဟောင်းသည်တူ၏၊ >
< start="775.474" dur="2.836"> ကျနော်တို့နှစ်ဖက်စလုံးကစားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်သင်ဘယ်အပေါ်ဘက်ရောက်နေတယ်ဆိုတာသင်မသိဘူး >
< start="778.31" dur="1.368"> အိုကောင်းကင်၊ >
< start="779.678" dur="2.169"> ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးအဖုံးကိုပိတ်ထားနိုင်တယ်။ >
< start="781.847" dur="1.201"> -Yeah, တပြင်လုံးကိုအရာချွတ်လာပါတယ်။ >
< start="783.048" dur="1.067"> - လူများသည်စတီရီယိုကိုခိုးယူသောကြောင့်။ >
< start="784.115" dur="1.402"> - သင်၏ကားထဲတွင်မည်သူမျှမချိုးဖောက်ပါ။ ဟုတ်တယ် >
< start="785.517" dur="2.703"> -Oh ဘယ်သူမှချိုးဖောက်ပြီးကက်ဆက်ဖွင့်စက်ကိုယူလိမ့်မည်မဟုတ်။ >
< start="788.22" dur="1.368"> - ကောင်းကင်ဘုံ >
< start="789.588" dur="4.004"> ဒါကြောင့်ဒီဟာကရင်ခုန်စရာအမူအရာများစွာထဲကတစ်ခုပါ။ >
< start="793.592" dur="1.001"> -ဝိုး။ [လက်ခုပ်သံများ] >
< start="794.593" dur="1.167"> -You ကြားရတော့မယ်။ >
< start="795.76" dur="1.87"> - ဒါဟာစိတ်ကူးကောင်းပါတယ် ဒီထက်ပိုချင်ပါတယ် >
< start="797.63" dur="2.168"> ကြားရတာနဲ့ချစ်တာကိုခံရတာ။ >
< start="799.798" dur="2.836"> [ရယ်သံများ] မေးခွန်းများ။ >
< start="802.634" dur="2.402"> တစ်ပတ်တစ်လျှောက်လုံးပိုမိုသောမေးခွန်းများ။ >
< start="805.036" dur="0.969"> ငါတို့ကသူတို့ကိုဖြန့်တော့မယ်။ >
< start="806.005" dur="1.267"> သို့သော် - မှန်ပါသလား။ >
< start="807.272" dur="2.403"> ငါ့နှလုံးခုန်သံအတွက် >
< start="809.675" dur="2.201"> -They ဒီမှာပါပဲ။ ဒါကငါ့အတွက်အနိုင်ရတာပေါ့၊ >
< start="811.876" dur="1.168"> [ရယ်သံများ] -Oh, ငါတို့အခုအဆုံးသတ်နေပြီလား။ >
< start="813.044" dur="1.335"> -Oh, yeah, ငါတို့မှာအဆုံးသတ်ပါတယ်။ [ရယ်သံများ] >
< start="814.379" dur="1.668"> - ကောင်းပြီ၊ ငါတို့ကြားဖို့လိုအပ်သမျှ >
< start="816.047" dur="1.268"> ဒါကငါကြားဖူးသမျှအကောင်းဆုံးဇာတ်လမ်းပဲ။ >
< start="817.315" dur="2.203"> - ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ဖူးဘူး - မဟုတ်ဘူး။ >
< start="819.518" dur="1.034"> လူမှုရေးဝေးကွာ - ဒါမှမဟုတ်ကားတစ်စီး။ >
< start="820.552" dur="1.402"> - မဟုတ်ပါ၊ >
< start="823.655" dur="1.968"> - ကလေးများအတွက်ကျောင်းကိုဆိုင်းငံ့ထားလိုက်သည် >
< start="825.623" dur="1.635"> ယခုနှစ်၏ကျန်သည်။ >
< start="827.258" dur="1.969"> ဆိုလိုတာကအားကစားဆိုတာမရှိဘူး၊ >
< start="829.227" dur="2.202"> နှင့်သင်တန်းအဘယ်သူမျှမကျောင်းကပွဲ။ >
< start="831.429" dur="3.604"> ဒါကြောင့်အဲဒီမှာထွက်ရှိသက်ကြီးရွယ်အိုများအားလုံးအတွက်၊ ဒီသီချင်းကမင်းအတွက်ပါ။ >
< start="835.033" dur="3.337"> အဲဒါကို "မင်းရဲ့မေမေနဲ့အတူ Prom" လို့ခေါ်တယ်။ >
< start="842.041" dur="3.636"> ♪မင်းအမေနဲ့အတူကျောင်းတက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်♪ >
< start="845.677" dur="3.604"> ♪မင်းအမေနဲ့အတူကျောင်းတက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်♪ >
< start="849.281" dur="3.47"> ♪သူမသည်သင်၏ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်သော်လည်းသူမတစ် ဦး တည်းသာဖြစ်သည် >
< start="852.751" dur="5.138"> your 'သင်၏ညီမကမငြင်းပါနှင့်သင့်ခွေးသည်မပျော် ause >
< start="857.889" dur="3.438"> ♪သူမဟာမင်းကိုအရမ်းကောင်းတဲ့ဖက်ရှင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်နဲ့ချိတ်ပေးမှာပါ♪ >
< start="861.327" dur="3.87"> your သင့်အဖေသည်ရပ်နေစဉ်တွင်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည် >
< start="865.197" dur="4.337">aမီးဖိုချောင်သုံးမည့်အစားကားနောက်ခန်းသို့ဗင်ကားအသေးစားတစ်စီးယူဆောင်လာသည် >
< start="869.534" dur="3.137"> mom ဘယ်မှာမင်းအမေနဲ့အတူကခုန်မလဲ♪ >
< start="872.671" dur="3.503"> ♪သင်၏အဘသည်လာကြတယ် >
< start="876.174" dur="3.904"> your သင့်ညီမက "မင်းကယောက်ျားတွေကအရမ်းဆိတ်ညံနေတယ်" says ပြောနေစဉ် >
< start="880.078" dur="3.67"> ♪အမေဟာ Prom ဘုရင်မပါ၊ မင်းက Prom ဘုရင် you'll ဖြစ်လိမ့်မယ်♪ >
< start="883.748" dur="5.005"> it's ဒါကလုံးဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာမဟုတ်ဘူး >
< start="888.753" dur="3.671"> the night night about night night night night night the night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night night the night the the night night night the night special night night the special night the the night the the night the the night special the night special the night night night the the night the night night night night night the night night night the night night night night the night night night night her night night night night her night night night her night night night her her her night her night her her ♪ her ♪ her ♪♪♪♪♪ her ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ her her ♪ >
< start="892.424" dur="3.837"> late သိပ်နောက်ကျသွားပြီ၊ သူမရဲ့ Facebook မှာကြိုက်တဲ့အရာတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်♪ >
< start="896.261" dur="2.803"> "အိုးကောင်းတယ်၊ အန်တီလင်ဒါကငါဟာအဖိုးတန်တယ်လို့ထင်တယ်။ " >
< start="901.833" dur="3.37"> the ကျောင်းကပွဲပြီးရင်သူမမျက်စိကို into ကြည့် you'll မည် >
< start="905.203" dur="3.304"> surprise ပြီးတော့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မင်းကိုယူခဲ့တဲ့ညအတွက်သူမကို thank ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="908.507" dur="4.537"> Mom Mom Mom'll Mom "Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom Mom ♪♪♪♪ say ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည် >
< start="913.044" dur="5.974"> ♪သို့သော်ဤသီးသန့်စိုက်ပျိုးခြင်းအတွက်သင်နှင့်အတူရှိနေခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်ဝမ်းမြောက်ပါသည်။ ♪ >
< start="919.018" dur="2.535"> ♪မင်းကမင်းရဲ့မိဖုရားပဲ၊ မင်းကငါ့အမေပဲ♪ >
< start="921.553" dur="2.002"> ♪မင်းဗုံးလား♪ >
< start="930.195" dur="3.337"> အိုးဟိုင်း။ ကိုယ့်ထိုင်ခုံတွေကို ၀ င်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ >
< start="933.532" dur="2.336"> ယောက်ျားများ၊ John Legend သည်ပထမဆုံးလူများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်သည် >
< start="935.868" dur="2.168"> Instagram မှသူ၏အိမ်မှဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ရန်။ >
< start="938.036" dur="1.768"> အရမ်းအေးသွားတယ် ငါယောဟန်နှင့်အတူဖမ်းမိ >
< start="939.804" dur="2.937"> ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးအကြောင်းပြောဆိုရန်။ စုံစမ်းသည်။ >
< start="942.741" dur="1.068"> သူငယ်ချင်း၊ >
< start="943.809" dur="1.668"> Buddy ငါအကောင်းဆုံးလုပ်လိုက်ပြီ။ >
< start="945.477" dur="2.069"> ဒီလိုလုပ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="947.546" dur="1.801"> -ဝမ်းသာစွာဖြင့်။ >
< start="949.347" dur="2.436"> အိုကေဒီမှာသွား။ >
< start="951.783" dur="2.703"> ကျွန်တော်အသံသွင်းနေတယ် ငါတို့သွားမယ် ဒါအားလုံးကောင်းတယ် >
< start="954.486" dur="2.268"> မင်းအခုဘယ်မှာလဲ >
< start="956.754" dur="2.704"> - ငါအိမ်မှာငါတို့ living ည့်ခန်းထဲမှာပါ။ >
< start="959.458" dur="1.301"> - ဒီလိုလုပ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="960.759" dur="1.201"> ငါတကယ်တကယ်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်, >
< start="961.96" dur="3.237"> ဒါကိုကြည့်နေတဲ့သန်းပေါင်းများစွာသောလူတွေလိုပဲ။ >
< start="965.197" dur="2.302"> - သင်သိကတည်းကအိပ်ရာပေါ်မှာလုပ်, \_ t >
< start="967.499" dur="2.035"> ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို "Tonight Show" မှာတကယ်ခံစားခဲ့ရတယ်။ >
< start="969.534" dur="2.035"> - အတိအကျ။ ဒါကဖုန်းခေါ်တာကောင်းပါတယ် >
< start="971.569" dur="1.369"> သူငယ်ချင်း၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုယ်ကသဘောပေါက်နားလည်။ >
< start="972.938" dur="3.77"> အချိန်တွေဖြည့်ဆည်းဖို့သင်ဘာတွေလုပ်နေလဲ။ >
< start="976.708" dur="2.937"> မင်းမှာကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ >
< start="979.645" dur="5.005"> သူတို့ကိုတစ်နေ့လုံးဖျော်ဖြေရန်မည်မျှခဲယဉ်းသည်ကိုသာကျွန်ုပ်တို့လေ့လာနေသည်။ >
< start="984.65" dur="1.534"> [ရယ်ကြတာနှစ်မျိုးလုံး] >
< start="986.184" dur="1.735"> -Luna ရဲ့ 3, ညာ? >
< start="987.919" dur="3.137"> - ဟုတ်တယ်၊ သူမတစ်လမှာ ၄ နှစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်၊ >
< start="991.056" dur="1.401"> -The ကလေးရဲ့ 1? >
< start="992.457" dur="2.302"> မေလသည် ၂ ရက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ >
< start="994.759" dur="3.27"> မွေးနေ့ပွဲတွေကျင်းပဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် >
< start="998.029" dur="1.168"> ဒါပေမယ့်ငါတို့မသိဘူး >
< start="999.197" dur="2.035"> ကျနော်တို့နေဆဲကြောင်းအချက်မှာဝေးကွာပါလိမ့်မယ်။ >
< start="1001.232" dur="1.802"> -Thet တော်တော်လေး - ဒါဟာတော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းပါပဲ။ >
< start="1003.034" dur="2.77"> သငျသညျ, Luna နှင့်အတူဂိမ်းများကိုကစားဖူး, ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများကို, >
< start="1005.804" dur="1.334"> သို့မဟုတ်သူမအဲဒီလိုမထားဘူး? >
< start="1007.138" dur="2.47"> သူမဟာ Hungry Hippo ကစားနည်းကိုလေ့လာသည်။ >
< start="1009.608" dur="1.768"> -အဲဒါကောင်းတယ်။ >
< start="1011.376" dur="4.438"> - ပြီးတော့သူမဂိမ်းကစားတဲ့အခါသူမအရမ်းသဘောကောင်းတာကိုသဘောပေါက်မိတယ်။ >
< start="1015.814" dur="2.435"> သူမသည်အားလုံးလမ်းအနိုင်ရချင်ပါဘူး။ >
< start="1018.249" dur="2.87"> လိုပဲသူမကကျွန်တော်တို့ကိုအခါတိုင်းချည်နှောင်ဖို့လိုသည်။ >
< start="1021.119" dur="2.435"> - မဟုတ်ဘူး! [ရယ်ကြတာနှစ်မျိုးလုံး] >
< start="1023.554" dur="2.437"> ထိုအရာသည်အနှစ်တစ်ထောင်ဆိတ်မလေးဖြစ်သည်မဟုတ်လော။ >
< start="1025.991" dur="2.836"> - သူမကိုပိုပြီးယှဉ်ပြိုင်စေချင်တယ်၊ >
< start="1028.827" dur="3.036"> - ဟုတ်တယ် သူမကြင်နာတာကိုကြိုက်တယ် >
< start="1031.863" dur="3.504"> ဒါပေမယ့်ကျိန်းသေသူမကိုဆုံးရှုံးသို့မဟုတ်လည်စည်းချင်ကြဘူး >
< start="1035.367" dur="4.438"> ပြီးတော့ကျွန်တော့်ကိုအနိုင်ရခြင်း၊ >
< start="1039.805" dur="2.569"> ဒါကြောင့်ငါတို့ကဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတယ်။ >
< start="1042.374" dur="1.501"> -Yeah, ငါ့သမီးဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့တူရဲ့။ >
< start="1043.875" dur="3.738"> ငါ Chutes & Ladders တွင် ဦး ဆောင်နေစဉ်သူမငိုသည်။ >
< start="1047.613" dur="1.601"> သူမက "ငါမလုပ်ချင်ဘူး" လိုပဲ >
< start="1049.214" dur="2.936"> "ဂိမ်းကိုပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။ အနိုင်ရလိမ့်မယ်။ လာစမ်းပါ" လိုပဲ >
< start="1052.15" dur="1.468"> - ဟုတ်တယ် ဒါပေမယ့်အရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ် >
< start="1053.618" dur="2.77"> "မဟုတ်ဘူး၊ အဖေ၊ မင်းအဆင်ပြေတယ်၊ ​​မင်းအဆင်ပြေတယ်။ >
< start="1056.388" dur="1.034"> မင်းအဆင်ပြေပါတယ် ငါတို့ချည်ထားတယ်။ >
< start="1057.422" dur="2.136"> ကြည့်ကြ၊ ငါတို့ချည်ထားတယ် "သူမအနိုင်ရခဲ့ရင်တောင် >
< start="1059.558" dur="2.268"> သူမသည်အမှန်တကယ်အနိုင်ရခဲ့သည်။ >
< start="1061.826" dur="2.87"> - Chrissy နဲ့ကောဘယ်လိုလဲ။ ယောက်ျားတွေဘာလုပ်နေလဲ >
< start="1064.696" dur="1.835"> မင်းရဲ့အချိန်တွေလား >
< start="1066.531" dur="1.802"> အများကြီး -Netflix ။ >
< start="1068.333" dur="1.402"> -Oh မင်းဘာတွေကြည့်နေတာလဲ မင်းဘာကြည့်နေတာလဲ >
< start="1069.735" dur="1.134"> ပြပွဲလိုတယ် >
< start="1070.869" dur="2.503"> ငါတို့ Peaky Blinders တွေလိုက်တက်နေတယ်။ >
< start="1073.372" dur="1.801"> ငါတို့ပြီးဆုံးပြီ >
< start="1075.173" dur="1.569"> ရာသီ ၅ ပြီးဆုံးပါပြီ။ >
< start="1076.742" dur="2.401"> ဒါကြောင့်ငါတို့စာသားအမီလိုက်နေကြတယ်၊ >
< start="1079.143" dur="1.102"> - ငါပြန်သို့ရတယ်။ >
< start="1080.245" dur="1.702"> "Peaky မျက်မမြင်များ" အကြောင်းအားလုံးကိုမေ့သွားတယ် >
< start="1081.947" dur="2.401"> ယခုရာသီ6လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ လာစမ်းပါ >
< start="1084.348" dur="1.369"> ကျနော်တို့ဖြစ်ပျက်ကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ >
< start="1085.717" dur="1.535"> ငါပြောခဲ့တာပဲ ကျွန်တော်ထိပ်တန်းစားဖိုမှူးကိုစတင်ခဲ့ပါတယ် >
< start="1087.252" dur="1.669"> ပြီးတော့ငါ 'Top Chef' ကိုအငမ်းမရစားတော့မယ်။ >
< start="1088.921" dur="1.968"> ငါမစောင့်နိုင်ဘူး၊ ပြီးတော့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပဲရှိသေးတယ်။ >
< start="1090.889" dur="1.935"> ငါ "ယောက်ျားတွေ!" သွား >
< start="1092.824" dur="2.169"> -သွားကြရအောင်! ငါ့ကိုလေးပေးပါ။ >
< start="1094.993" dur="2.335"> လေးပြီးသားလုပ်ဖို့ရှိတယ်ရှိတယ်ငါသိ၏။ လာပါ။ >
< start="1097.328" dur="3.103"> လုံးဝကင်းတယ်၊ ပြီးတော့ကျနော်တို့က Tiger King ကိုကြည့်နေတယ်။ >
< start="1100.431" dur="2.47"> လူတိုင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးပါပဲ >
< start="1102.901" dur="1.502"> - ငါမမြင်ရသေးဘူး >
< start="1104.403" dur="2.001"> ဒါထူးထူးဆန်းဆန်းလား >
< start="1106.404" dur="5.54"> - ဒါဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ထူးဆန်းပြီးအရမ်းရယ်စရာကောင်းတယ်။ >
< start="1111.944" dur="3.269"> ပြီးတော့ဒါဟာယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုရဲ့ပြတင်းပေါက်တစ်ခုပါ >
< start="1115.213" dur="2.769"> သင်၌သင်မဟုတ်လျှင်သင်ရုံအကြောင်းကိုစိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်။ >
< start="1117.982" dur="3.037"> - ကိုယ်ပိုင်တိရစ္ဆာန်ရုံပိုင်တဲ့လူတွေလား။ အဲဒါမှန်လား? >
< start="1121.019" dur="3.17"> - ဟုတ်တယ် ဒါကြောင့်အမေရိက >
< start="1124.189" dur="5.739"> ကျားများကဲ့သို့သောတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအတွက်အကြီးဆုံးကျက်စားရာနေရာဖြစ်သည်။ >
< start="1129.928" dur="4.404"> ငါတို့အမေရိကမှာကျားတွေပိုများလာတယ် >
< start="1134.332" dur="3.804"> ကမ္ဘာပေါ်မှာကျန်ရှိနေတဲ့တောရိုင်းတွေထက်ပိုပါတယ်။ >
< start="1138.136" dur="2.937"> ဒါအရူးမဟုတ်ဘူးလား - ဘယ်မှာလဲ ဖလော်ရီဒါလား >
< start="1141.073" dur="2.735"> ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်။ ဒါကြောင့်ဖလော်ရီဒါတွေအများကြီးပါ။ >
< start="1143.808" dur="1.702"> ကျွန်ုပ်အတွက်ဖလော်ရီဒါကဲ့သို့ခံစားရသည် >
< start="1145.51" dur="2.603"> ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ ဒါပေမယ့်လည်းဥက္ကလာဟိုးမားပြည်နယ်လည်းဖြစ်တယ်။ >
< start="1148.113" dur="2.702"> ဒါဟာ Saga အောက်ပါအတိုင်း >
< start="1150.815" dur="7.141"> ယှဉ်ပြိုင်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်များ၏ဤအုပ်စုသည်, >
< start="1157.956" dur="3.57"> ပြီးတော့လူသတ်မှုလည်းရှိတယ်။ ပယောဂရှိတယ်။ သူ့မှာဖောက်ပြန်မှုရှိတယ်။ >
< start="1161.526" dur="3.471"> အရာအားလုံးရှိတယ်။ အရူးပါ >
< start="1164.997" dur="2.301"> ဂျင်မီမင်းအခုထိုင်ပြီးထိုင်နေပြီလား။ >
< start="1167.298" dur="2.503"> -Yeah ငါကီထိုင်အတွက်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်တယ်။ >
< start="1169.801" dur="1.668"> အဲဒါငါလုပ်ဖို့ပြောခဲ့တာပဲ - အိုကေ။ >
< start="1171.469" dur="1.935"> ကောင်းပြီ၊ ဒါကအကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။ >
< start="1173.404" dur="2.403"> ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာလုံးလုံးအလုပ်မလုပ်ဘူးလို့ခံစားရတယ် >
< start="1175.807" dur="1.301"> ငါနောက်ဆုံးတော့ယခုအပတ်ကဆိုသည် >
< start="1177.108" dur="2.937"> ငါတကယ်တော့နောက်တဖန်ထွက်အလုပ်လုပ်တူတူသွားပါလိမ့်မယ်။ >
< start="1180.045" dur="2.669"> - ရလာတဲ့အခါမှာထိုင်ခုံမှာခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လုပ်နေတာပဲ - >
< start="1182.714" dur="3.003"> ရုတ်တရက်အားလုံး, သင်ရုံပတ်ပတ်လည်ရပ်, ရုံကီထိုင်အတွက်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်။ >
< start="1185.717" dur="1.301"> အိုကေဒီမှာသွား။ >
< start="1187.018" dur="1.735"> - ထိုင်ပြီးထိုင်ခိုးကြည့်လိုက်သည်။ ငါပြောတာအားလုံးပဲ >
< start="1188.753" dur="1.802"> ♪ကီထိုင်၊ ကီထိုင်၊ ကီထိုင်--ကီထိုင် ats >
< start="1190.622" dur="2.335"> ♪ကီထိုင်၊ ကီထိုင်၊ ကီထိုင်,-ကီထိုင်-ကီထိုင်, ♪ကီထိုင်♪ >
< start="1192.957" dur="2.27"> - လူတိုင်း! >
< start="1195.227" dur="2.335"> အိုကေ။ ငါသူတို့ကိုတယ်။ >
< start="1197.562" dur="2.736"> - ဟေးငါပြောတာတစ်ခုကလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="1200.298" dur="2.969"> ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြပွဲအပြင်, သင်တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေပွဲလုပ်ခဲ့တယ်။ >
< start="1203.267" dur="2.603"> - ဟုတ်တယ် -အရမ်းမိုက်တယ်။ >
< start="1205.87" dur="2.136"> ငါအဲ့တာကိုကြိုက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ငါအများကြီးလူများကချစ်ကြတယ်ငါသိ၏။ >
< start="1208.006" dur="2.502"> မင်းကိုဘာလုပ်စေခဲ့တာလဲ။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဘာကလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလဲ။ >
< start="1210.508" dur="2.269"> - ငါကလုပ်နေတာပေါက်ကွဲမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ >
< start="1212.777" dur="3.538"> ငါတို့ - မင်းတို့အားလုံးသိတယ်၊ >
< start="1216.315" dur="2.001"> အနုပညာရှင်တွေအများကြီးအပါအဝင်အနုပညာရှင်တွေအများကြီး >
< start="1218.316" dur="1.435"> အဘယ်သူသည်အခုအချိန်မှာခရီးစဉ်အပေါ်ဖြစ်ထင်နေကြသည်။ >
< start="1219.751" dur="1.835"> ငါ့ခရီးစဉ်နွေရာသီအထိမ >
< start="1221.586" dur="3.504"> ဒါပေမယ့်အိမ်မှာကပ်နေတဲ့ပရိတ်သတ်တွေအများကြီးရှိတယ် >
< start="1225.09" dur="3.737"> သူတို့ပုံမှန်အားဖြင့်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုလုပ်နေတာထွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အလိုရှိ၏ >
< start="1228.827" dur="1.701"> သူတို့ဖျော်ဖြေပွဲသွားထွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အလိုရှိ၏ >
< start="1230.528" dur="2.736"> နှင့်ဤအရာအလုံးစုံသည်အခြားပျော်စရာအမှုအရာလုပ်နေတာ။ >
< start="1233.264" dur="4.038"> ဒါပေမယ့်အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့လူတိုင်းကိုအတူတကွစုစည်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခဲ့တယ် >
< start="1237.302" dur="3.603"> ဖျော်ဖြေပွဲများ၏ဤတိုက်ရိုက်စီးလုပ်ဖို့ဖြစ်လိမ့်မယ်, >
< start="1240.905" dur="1.936"> ငါတို့သည်ဤအတွေးအခေါ်နှင့်အတူပေါ်လာသောတစ်ခုတည်းသောသူများမဟုတ်ပါ။ >
< start="1242.841" dur="4.638"> ခရစ်မာတင်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်တစ်ချိန်တည်းအတူတူတက်လာနေသည်။ >
< start="1247.479" dur="3.036"> ငါမန်နေဂျာတွေကိုငါလုပ်ချင်တာကိုပြောတဲ့အခါသူတို့က >
< start="1250.515" dur="3.069"> "Chris Martin က Global Citizen အတွက်တစ်ခုလုပ်ပေးမယ်။ " >
< start="1253.584" dur="2.303"> ငါတို့မတိုင်မီပိုက်ဆံစုဆောင်းခဲ့သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည် >
< start="1255.887" dur="4.872"> နှင့်၎င်းတို့၏ဖြစ်ရပ်အချို့ကို NBC နှင့် MSNBC တွင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ >
< start="1260.759" dur="3.804"> ဒီတော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံသားတွေနဲ့လုပ်ရတာစိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ >
< start="1264.563" dur="2.134"> ငါတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့, >
< start="1266.697" dur="1.402"> ကိုယ့်စိတ်ကူးမှအသိအမြင်ရောက်စေဖို့ကြိုးစားနေ >
< start="1268.099" dur="2.869"> လူတွေဟာအိမ်မှာနေပြီးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဝေးဝေးနေသင့်တယ်။ >
< start="1270.968" dur="1.269"> ဒါကြောင့်ငါတို့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြသည် >
< start="1272.237" dur="2.068"> ကျမတို့အတွက်ပိုက်ဆံရှာနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအချို့က >
< start="1274.305" dur="3.37"> လူတွေကိုဖျော်ဖြေဖို့နဲ့လူတွေကိုစုရုံးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ >
< start="1277.675" dur="3.704"> ပရိတ်သတ်ရှေ့မှောက်ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုလုပ်ခြင်း၊ >
< start="1281.379" dur="3.77"> ပါးနပ်သောလား။ ဒါထူးဆန်းလားဒါမှမဟုတ်သင်ကြိုက်လား? >
< start="1285.149" dur="3.337"> - ဒီဟာကအရမ်းပျင်းစရာကောင်းပေမယ့်ငါပြောမယ် >
< start="1288.486" dur="4.538"> ဘာလို့လဲဆိုတော့ Instagram Live မှာမှတ်ချက်တွေပေါ်လာလို့ပါ >
< start="1293.024" dur="3.27"> တစ်ယောက်ယောက်ကိုလုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာနှလုံးသားလေးရှိလာတယ်၊ >
< start="1296.294" dur="3.07"> အမှန်တကယ်သင်သည် Instagram Live မှအသေးစိတ်အချက်အလက်များရရှိသည် >
< start="1299.364" dur="1.368"> သင်တစ် ဦး ပရိသတ်ကိုထံမှရလိမ့်မယ်ထက်။ >
< start="1300.732" dur="3.336"> လိုချင်တာကမင်းကရွှင်လန်းမှုမရပေမယ့်မင်းရတယ် >
< start="1304.068" dur="1.535"> - "ငါတကယ်ပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ " >
< start="1305.603" dur="2.736"> - ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ် - ရတယ်၊ မင်းရတယ်၊ အိုး၊ မင်းဒီသီချင်းကိုဖွင့်လို့ရမလား။ >
< start="1308.339" dur="2.503"> အမ်၊ အမ် - "- [ရယ်သံများ] >
< start="1310.842" dur="3.37"> - ကျပန်းတောင်းဆိုမှုအမျိုးအစားများ၊ မေးခွန်းများ၊ >
< start="1314.212" dur="1.602"> ပြီးတော့ပရိသတ်ဆီကနေခင်ဗျားဒါကိုဘယ်တော့မှရောက်မှာမဟုတ်ဘူး >
< start="1315.814" dur="2.636"> သငျသညျ, တူ, ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်, သင်သိ, မေးလျှင်မဟုတ်လျှင် >
< start="1318.45" dur="2.168"> တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်အသေးစိတ်တုံ့ပြန်ချက်သည်။ >
< start="1320.618" dur="1.035"> - [ရယ်သံများ] >
< start="1321.653" dur="1.868"> အားလုံးတိတ်ဆိတ်ကြပါစို့။ တစ်ကြိမ်မှာတစ်ခု >
< start="1323.521" dur="2.169"> တစ်ကြိမ် -One ။ [ရယ်သံများ] >
< start="1325.69" dur="1.568"> - ဒါကထူးဆန်းတဲ့ပါပဲ။ - ဟုတ်တယ် >
< start="1327.258" dur="3.738"> - ပြီးတော့မင်းပြောနိုင်တာက 'D-Nice ငါတို့မနေ့ညကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့လို့ပဲ။ >
< start="1330.996" dur="1.968"> မင်းဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာမင်းစစ်ဆေးကြည့်ရမလားမသိဘူး။ >
< start="1332.964" dur="2.435"> - ဟုတ်တယ် - ရူးခဲ့တယ် >
< start="1335.399" dur="2.169"> -Dell Nice သည်ငါတို့၏မိတ်ဆွေဟောင်းဖြစ်သည်။ >
< start="1337.568" dur="3.037"> ပြီးတော့သူကကျွန်တော့်အိမ်မှာ ၄၀ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုကစားခဲ့တယ်။ >
< start="1340.605" dur="1.468"> ပြီးတော့သူ - >
< start="1342.073" dur="2.802"> ငါသည်သူ၏ Instagram ဘဝမှအပေါ်လျှိုလျှိုပေါ်ပေါက်ခဲ့သည် >
< start="1344.875" dur="1.869"> သူကအပတ်အစောပိုင်းကသူတို့ကိုလုပ်နေတာအခါ, >
< start="1346.744" dur="3.271"> ဒါပေမယ့်စနေနေ့မှာပဲပေါက်ကွဲခဲ့တယ်၊ >
< start="1350.015" dur="2.135"> သူအရမ်းပျော်ခဲ့တယ် - ဟုတ်တယ် >
< start="1352.15" dur="1.835"> သူနဲ့စကားပြောနေတုန်းမျောနေတာပဲ၊ >
< start="1353.985" dur="1.969"> ပြီးတော့ဒါကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် >
< start="1355.954" dur="2.402"> သင်တို့ကဲ့သို့ယောက်ျားသည်ဤအဆိုတော်ကြည့်ဖို့ >
< start="1358.356" dur="3.604"> တိတ်ဆိတ်စွာနေရန်အချည်းနှီးသောအခန်းဖျော်ဖြေ။ >
< start="1361.96" dur="3.37"> ဒါပေမယ့်ထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေနားထောင်နေကြတယ် >
< start="1365.33" dur="2.069"> ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုထုတ်ဖော်ပြသ >
< start="1367.399" dur="2.768"> အဲဒါဟာအေးမြတဲ့အသစ်တစ်ခုပဲ >
< start="1370.167" dur="1.869"> ငါတို့တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူးလို့ထင်တယ် >
< start="1372.036" dur="2.903"> -Yeah, နှင့်ယခုအချိန်တွင်မှောင်မိုက်နှစ်ဖက်အများကြီးရှိပါတယ်, >
< start="1374.939" dur="3.137"> ဒါပေမယ့်ဒီအငွေအချပ်အချို့ဖြစ်နိုင်သည်ဆိုတဲ့အချက်ကို >
< start="1378.076" dur="3.603"> ငါရှိသည်လုပ်ထင်ပါတယ် >
< start="1381.679" dur="3.67"> ငါတို့အတူတူတွေ့ကြုံခံစားနေရတယ်လို့ခံစားရတယ်၊ >
< start="1385.349" dur="2.437"> ငါတို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဝေးကွာနေပေမယ့် >
< start="1387.786" dur="2.635"> ငါတို့အချင်းချင်းဖြတ်ပြီးကူညီပေးနေတယ်။ >
< start="1390.421" dur="1.335"> -ဘာဖြစ်သလဲ -- >
< start="1391.756" dur="3.07"> ယနေ့ညသင်ရွေးချယ်သောလှူဒါန်းမှုသည်အမေရိကကိုအစာကျွေးခြင်းဖြစ်သည်။ >
< start="1394.826" dur="2.202"> - ဟုတ်တယ် - ဒါကမင်းအတွက်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ >
< start="1397.028" dur="3.07"> - ဒါဆိုသူတို့တစ်နိုင်ငံလုံးမှာအစားအစာဘဏ်တွေရှိတယ်။ >
< start="1400.098" dur="2.369"> ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုကတော့ - >
< start="1402.467" dur="1.134"> ပထမဆုံးလူတွေရှိတယ် >
< start="1403.601" dur="1.802"> အမေရိကရှိနေ့တိုင်းဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသော >
< start="1405.403" dur="2.903"> ဒါပေမယ့်ဒီအကျပ်အတည်း၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခု >
< start="1408.306" dur="2.536"> လူငယ်အများစုကိုပြောနေတာဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ >
< start="1410.842" dur="1.801"> ကျောင်းမလာဖို့ >
< start="1412.643" dur="4.806"> နှင့်အကြိမ်များစွာ, အစားအစာများအတွက်၎င်းတို့၏နိယာမအရင်းအမြစ် >
< start="1417.449" dur="2.469"> သူတို့ကကျောင်းမှာရတယျ။ တချို့ကနယူးယောက်မှာလို >
< start="1419.918" dur="2.336"> အချို့ကကျောင်းတွင်မနက်စာနှင့်နေ့လည်စာစားကြသည်။ >
< start="1422.254" dur="4.104"> ပြီးတော့သူတို့ကရုန်းကန်နေရတဲ့မိသားစုထဲမှာရှိနေရင်၊ >
< start="1426.358" dur="3.936"> သူတို့ကိုကျွေးမွေးဖို့ကျောင်းမရှိဘူး၊ >
< start="1430.294" dur="3.204"> စားစရာအလုံအလောက်မရှိတဲ့ရှေးရှေးတွေအများကြီးရှိတယ် >
< start="1433.498" dur="1.602"> နှင့်ဤအချိန်ကာလအတွင်းဆာလောင်မွတ်သိပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ >
< start="1435.1" dur="2.001"> ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နေရသောကျန်းမာရေးပြtoနာများအပြင် >
< start="1437.101" dur="3.104"> ငါတို့မြင်နေရတဲ့စီးပွားရေးပြissuesနာတွေအပြင် >
< start="1440.205" dur="1.567"> ရှေးရှေးအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းမဟုတ် >
< start="1441.772" dur="2.67"> နှင့်စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက် imploding >
< start="1444.442" dur="1.668"> ဤအရာအလုံးစုံဖြစ်ပျက်ခြင်း၊ >
< start="1446.11" dur="2.77"> ဆာလောင်မွတ်သိပ်မယ့်ရှေးရှေးတွေအများကြီးရှိတယ်၊ >
< start="1448.88" dur="2.803"> ဟိုဆေးအန်ဒရက်စ်နှင့်တွေ့သည် >
< start="1451.683" dur="1.268"> သူနှင့်အတူလုပ်နေတာဘာလုပ်နေလဲ - >
< start="1452.951" dur="1.201"> -He ရဲ့အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ >
< start="1454.152" dur="2.402"> -He ရဲ့အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ဒီအစားအစာဘဏ်တွေရှိတယ် >
< start="1456.554" dur="1.435"> တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ >
< start="1457.989" dur="4.071"> နှင့်အမေရိကားတိုက်ကျွေးခြင်းသည်ရန်ပုံငွေစုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည် >
< start="1462.06" dur="1.734"> ဒီအစားအစာဘဏ်တွေအတွက် >
< start="1463.794" dur="3.104"> သူတို့သည်တပြည်လုံး၌နှံ့ပြားကျော်စောကြ၏ >
< start="1466.898" dur="2.936"> လူတွေကိုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ဖို့ကူညီပေးနေသောကွဲပြားခြားနားသောအစားအစာဘဏ်များ။ >
< start="1469.834" dur="4.438"> -NBCs မှာမင်းတို့ယောက်ျားတွေကြည့်မယ်ဆိုရင် feedamerica.org ကိုသွားကြည့်ပါ >
< start="1474.272" dur="1.401"> နှင့်မည်သို့လှူဒါန်းမည်ကိုလေ့လာပါ။ >
< start="1475.673" dur="1.535"> ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကို YouTube မှာကြည့်နေရင်၊ >
< start="1477.208" dur="2.102"> တစ်နေရာရာမှာ Donate ခလုတ်ရှိတယ် >
< start="1479.31" dur="1.469"> ဒီမှာလားဒါမှမဟုတ်ဒီမှာလား >
< start="1480.779" dur="2.402"> သို့သော်၎င်းကို နှိပ်၍ မည်သည့်ငွေပမာဏကိုမဆိုကူညီနိုင်သည်။ >
< start="1483.181" dur="4.538"> တကယ်တော့ဆိုငွေပမာဏအနည်းဆုံး - ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။ >
< start="1487.719" dur="3.17"> ၅၀ ဆင့်နဲ့ဘာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာမင်းမသိဘူး။ >
< start="1490.889" dur="3.87"> အံ့သြစရာပါပဲ ဒါကြောင့်တစ်ခုခုပေးပါ။ >
< start="1494.759" dur="3.103"> ဂျွန်၊ မင်းကိုမင်းမသွားခင်ငါမင်းလုပ်ခဲ့တာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="1497.862" dur="2.737"> ရှိတယ် - ဒီညငါတို့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်တစ်ခုလုပ်မယ်၊ >
< start="1500.599" dur="1.334"> ငါတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်။ - ဟုတ်တယ် >
< start="1501.933" dur="3.303"> တကယ်တော့၊ ငါတို့ကိုမင်းအရင်ကထက်ပိုပြီးလိုအပ်နေတယ်။ >
< start="1505.236" dur="2.235"> ဒါကြောင့်ဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် -ဒါပေါ့။ >
< start="1507.471" dur="2.003"> - ကျွန်တော်တို့ကိုအယ်လ်ဘမ်အသစ်မှာသဲလွန်စပေးလို့ရမလား။ >
< start="1509.474" dur="1.601"> မကြာခင်ထွက်လာမလား? >
< start="1511.075" dur="1.702"> -Yeah, အယ်လ်ဘမ်အသစ်လာမယ့်နေသည်။ >
< start="1512.777" dur="1.501"> ငါတို့ရောနှောနေတယ် >
< start="1514.278" dur="3.604"> ငါတို့သိတဲ့အတိုင်းငါတို့ကြိုးတွေချည်းပဲ။ >
< start="1517.882" dur="2.77"> ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို string string ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမသေချာဘူး၊ >
< start="1520.652" dur="2.001"> ငါမသိတဲ့အတွက် >
< start="1522.653" dur="4.005"> ဘယ်လို orchestral မှတ်တမ်းတင်ခြင်းသို့ငါတို့လမ်းကိုဘယ်လိုဝေးကွာစေနိုင်သနည်း။ >
< start="1526.658" dur="1.268"> [ရယ်ကြတာနှစ်မျိုးလုံး] >
< start="1527.926" dur="1.735"> -Yeah, ထိုပါလိမ့်မယ် - ငါတို့ထွက်တွက်ဆပါလိမ့်မယ်။ >
< start="1529.661" dur="2.502"> ဒီတစ်ခါလည်းကျွန်တော်တစ်ကြိမ်မှာကစားသမားအနည်းငယ်လိုလုပ်ရလိမ့်မယ် >
< start="1532.163" dur="2.602"> ပြီးတော့သင်သိ, ဒါကြောင့် overdub ။ ကျနော်တို့ကတွက်ဆပါလိမ့်မယ်။ >
< start="1534.765" dur="1.936"> - အဲဒါကိုသင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာအထူးသီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ >
< start="1536.701" dur="3.504"> - ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်တနည်းအားဖြင့်အဲဒါအများစုဟာမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးသားပါ။ >
< start="1540.205" dur="1.901"> ငါသည်ငါ့အသံအားလုံးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ >
< start="1542.106" dur="3.637"> အဓိကအစီအစဉ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည် >
< start="1545.743" dur="2.736"> ငါတို့ပြီးသွားတဲ့အချိန်အနည်းငယ်သာလုပ်ရတော့မယ်၊ >
< start="1548.479" dur="1.569"> ပြီးတော့ငါတို့ရောနှောမယ်။ >
< start="1550.048" dur="1.768"> ထိုအခါငါဂီတကိုချစ်။ >
< start="1551.816" dur="2.603"> ကျွန်တော်ဒီကာလအတွင်းမှာမရေးခဲ့ပါဘူး >
< start="1554.419" dur="1.868"> ဒါကြောင့်ဒါဟာတကယ်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ >
< start="1556.287" dur="2.869"> ဒီအခိုက်အတန့်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေရဲ့အကြောင်း။ >
< start="1559.156" dur="1.402"> -Right ။ >
< start="1560.558" dur="2.736"> တကယ်တော့ဒါဟာငါ့ရဲ့အချစ်ဆုံးအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် ... >
< start="1563.294" dur="1.202"> -ဘာ! >
< start="1564.496" dur="4.137"> သင်အိမ်၌ရှိနေလျှင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် >
< start="1568.633" dur="2.536"> နှင့် Corona ကလေးအချို့မွေးချင်တယ်။ >
< start="1571.169" dur="3.603"> [ရယ်ကြတာနှစ်မျိုးလုံး] >
< start="1574.772" dur="2.002"> -ကောင်းလိုက်တာ။ ကောင်းပြီ၊ >
< start="1576.774" dur="3.404"> - ဒါကြောင့်ငါသိတယ်၊ >
< start="1580.178" dur="2.603"> သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အချိန်များစွာကုန်လွန်လျှင် >
< start="1582.781" dur="3.87"> ပြီးတော့မင်းဒီတေးသံကိုလိုတယ်၊ ဒီအယ်လ်ဘမ် ... >
< start="1586.651" dur="2.769"> - ဒါဖြစ်နိုင်ပါတယ် -... ဖြစ်နိုင်ပါတယ် >
< start="1589.42" dur="1.602"> -You ဟာလူကောင်းတစ်ယောက်ပါ။ မင်းလုပ်သမျှအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="1591.022" dur="1.768"> နှင့်ဒီလုပ်ဖို့အချိန်ယူဘို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="1592.79" dur="1.902"> ပြီးတော့ feedamerica.org ။ >
< start="1594.692" dur="1.435"> ဒီမှာလူတိုင်းကမင်းကိုတန်ဖိုးထားတယ်၊ >
< start="1596.127" dur="1.635"> ပြီးတော့ဒီညနောက်ပိုင်းမှာသီချင်းလုပ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="1597.762" dur="2.636"> ငါတကယ်တကယ်တန်ဖိုးထားတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bud ။ >
< start="1600.398" dur="2.302"> -ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ -Bye ဂျွန်။ >
< start="1602.7" dur="3.437"> သူ၏အိမ်မှသီချင်း“ Actions” အသစ်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊ >
< start="1606.137" dur="3.904"> ဂျွန်ဒဏ္Legာရီ။ >
< start="1612.61" dur="3.07"> - ♪ဟေ့၊ >
< start="1615.68" dur="2.202"> ♪ La-da-da၊ da-da ♪ >
< start="1617.882" dur="3.737"> ♪ La-da-da၊ da-da၊ la-da ♪ >
< start="1621.619" dur="2.536"> ♪ La-da-da-da-da here ဒီမှာငါထပ်သွားမယ် go >
< start="1624.155" dur="2.802"> ted ငါဖြုန်းတီးခဲ့သည့်အခြားချစ်ခြင်းမေတ္တာသီချင်းနှင့်♪ >
< start="1626.957" dur="2.903"> love နောက်ထပ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်ခုသည်သည်းခံခြင်းကင်းမဲ့သွားသည် >
< start="1629.86" dur="3.27"> ♪သူမသည်မလိုချင်ပါ၊ မလိုအပ်ပါ။ ♪ >
< start="1633.13" dur="2.569"> my ကျွန်ုပ်၏ဘောပင်မှလာသည့်အခြားစကားလုံး♪ >
< start="1635.699" dur="3.037"> ♪သူမသည် "မင်းဘယ်မှာလဲ" လို့ငါ့မျက်နှာကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ ♪ >
< start="1638.736" dur="4.038"> so ကျွန်ုပ်သည်ကဗျာဆန်လွန်းသည်ဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းကိုချန်လှပ်မိလိုက်သကဲ့သို့ခံစားမိသည် >
< start="1642.774" dur="1.401"> ♪ချော်ပါ♪ >
< start="1644.175" dur="3.003"> ♪ကျွန်ုပ်၏မေတ္တာသည်ခိုင်ခံ့ကြောင်းပြသရန်♪ >
< start="1647.178" dur="3.07"> home ကျွန်ုပ်အိမ်၌ရှိနေစဉ်သူမကိုခံစားစေပါ >
< start="1650.248" dur="5.972"> ♪ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ထွက်သွားသည့်အခါအတုမရှိ၊ အမှားမရှိ၊ သူမခံစားနိုင်သည် >
< start="1656.22" dur="4.638"> ♪လုပ်ရပ်များသည် l ထက်အသံကျယ်စွာပြောခြင်း၊ >
< start="1660.858" dur="3.604"> love အချစ်သီချင်းများထက်အသံကျယ်စွာပြောပါ♪ >
< start="1664.462" dur="3.303"> they သူတို့ဆက်သနေသောတေးသံ♪ >
< start="1667.765" dur="4.672"> ♪လုပ်ရပ်များသည် l ထက်အသံကျယ်စွာပြောခြင်း၊ >
< start="1672.437" dur="3.57"> love အချစ်သီချင်းများထက်အသံကျယ်စွာပြောပါ♪ >
< start="1676.007" dur="3.47"> wrong ငါအမှားအယွင်းတွေအားလုံးလုပ်နေတယ်♪ >
< start="1679.477" dur="2.502"> ♪ La-da-da-da-da ။ ဒီမှာငါတို့ထပ်သွားကြမယ်♪ >
< start="1681.979" dur="2.704"> benefits အကျိုးကျေးဇူးအချို့ရှိသောသူငယ်ချင်းနှစ် ဦး ♪ >
< start="1684.683" dur="3.035"> ♪သူမသည်သူမ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားလုံးကိုပေးသည်၊ ထို့နောက်ငါဖြုန်းတီးသည် >
< start="1687.718" dur="2.77"> song သီချင်းအသစ်တစ်ခုကိုရေးပါ၊ ထို့နောက်ဖျက်ပါ♪ >
< start="1690.488" dur="3.07"> before အိုး before အရင်ကငါပြောခဲ့သမျှသောအရာများ♪ >
< start="1693.558" dur="3.036"> she သူမအကြောင်းကြားလိုခြင်းမရှိတော့ကြောင်း♪ပြောခဲ့သည် >
< start="1696.594" dur="2.169"> ♪ငါအရမ်းတီထွင်ဖန်တီးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ like ခံစားရတယ် >
< start="1698.763" dur="3.469"> stay သင့်ကိုနေဖို့ပြောစရာဘာမှမရှိ♪ stay >
< start="1702.232" dur="5.84"> love ကျွန်ုပ်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားပြသခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အိမ်၌ရှိနေစဉ်သူမကိုခံစားစေပါ >
< start="1708.072" dur="6.04"> ♪ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ထွက်သွားသည့်အခါအတုမရှိ၊ အမှားမရှိ၊ သူမခံစားနိုင်သည် >
< start="1714.112" dur="4.638"> ♪လုပ်ရပ်များသည် l ထက်အသံကျယ်စွာပြောခြင်း၊ >
< start="1718.75" dur="3.603"> love အချစ်သီချင်းများထက်အသံကျယ်စွာပြောပါ♪ >
< start="1722.353" dur="3.303"> they သူတို့ဆက်သနေသောတေးသံ♪ >
< start="1725.656" dur="4.605"> ♪လုပ်ရပ်များသည် l ထက်အသံကျယ်စွာပြောခြင်း၊ >
< start="1730.261" dur="3.637"> love အချစ်သီချင်းများထက်အသံကျယ်စွာပြောပါ♪ >
< start="1733.898" dur="3.404"> wrong ငါအမှားအယွင်းတွေအားလုံးလုပ်နေတယ်♪ >
< start="1740.104" dur="2.803"> ♪ La-da-da-da, la-da-da၊ တစ်နေ့လုံး♪ >
< start="1742.907" dur="2.202"> ♪သူမကြားချင်သည်၊ မကြားချင်ပါ♪ >
< start="1745.109" dur="3.737"> I ငါပြောသောစကားလုံးတစ်လုံးaငါပြောသောစကားလုံး♪ >
< start="1751.749" dur="2.77"> ♪ La-da-da-da, la-da-da၊ တစ်နေ့လုံး♪ >
< start="1754.519" dur="2.569"> ♪သူမကြားချင်သည်၊ မကြားချင်ပါ♪ >
< start="1757.088" dur="3.437"> I ငါပြောသောစကားလုံးတစ်လုံးaငါပြောသောစကားလုံး♪ >
< start="1760.525" dur="4.504"> ♪လုပ်ရပ်များသည် l ထက်အသံကျယ်စွာပြောခြင်း၊ >
< start="1765.029" dur="3.537"> love အချစ်သီချင်းများထက်အသံကျယ်စွာပြောပါ♪ >
< start="1768.566" dur="3.236"> they သူတို့ဆက်သနေသောတေးသံ♪ >
< start="1771.802" dur="3.437"> ♪အပြုအမူများသည် than ထက် ပို၍ အသံကျယ်သည် >
< start="1775.239" dur="5.139"> songs အချစ်သီချင်းများထက်အသံကျယ်စွာပြောပါ♪ >
< start="1780.378" dur="3.069"> wrong ငါအမှားအယွင်းတွေအားလုံးလုပ်နေတယ်♪ >
< start="1787.551" dur="2.069"> [Chuckles] ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="1789.62" dur="2.502"> - ဒီနေ့ပြပွဲမှာလူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="1792.122" dur="1.469"> John Legend၊ >
< start="1793.591" dur="1.769"> ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ရုံသာမကပြောနေတာလည်းပါပါတယ်။ >
< start="1795.36" dur="1.334"> ဘာအနုပညာရှင်ပါလဲ >
< start="1796.694" dur="2.836"> ကင်မရာအမှန်ဖြစ်လို့ကျွန်တော့်ဇနီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="1799.53" dur="2.469"> အဖြစ်ကောင်းစွာကင်မရာအော်ပရေတာဖြစ်ခြင်း။ >
< start="1801.999" dur="1.669"> ထိုအခါငါတစ် ဦး Selfie ချောင်းကိုအသုံးပြု။ ငါ့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ >
< start="1803.668" dur="1.501"> ဒါကကြီးမားတဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ >
< start="1805.169" dur="2.135"> ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နှင့်ဂရပ်ဖစ်များအတွက် Winnie, >
< start="1807.304" dur="2.57"> ကိုယ့်န်းကျင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ခြင်းများအတွက် Franny ။ >
< start="1809.874" dur="2.436"> ငါကြည့်ရတာမင်းကောင်လေးတွေကိုချစ်တယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ >
< start="1812.31" dur="1.367"> NBC ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="1813.677" dur="1.869"> သင်၏လက်ကိုလျှော်ပါ။ မျက်နှာမထိနဲ့ >
< start="1815.546" dur="2.736"> လုံခြုံစွာနေပါ၊ နက်ဖြန်နေ့၌သင်တို့ကိုတွေ့မြင်မည်။ >
< start="1818.282" dur="2.303"> နောက်ထပ်ပြပွဲအသစ် နုတ်ဆက်ပါတယ်! >